Ferrari Model LEGO ® Collection at Shell Malaysia!
Hmu Zaw is bluffing, His fake propaganda postings came on the first day of widespread Murders weeks before any fake pictures surfaced
The Poems of Aung San Suu Kyi
The Armed Forces in Umno quagmire by Commander (Rtd) S THAYAPARAN, formerly of the Royal Malaysian Navy
Animal Puns For Fun
ရခိုင်အကြမ်းဖက်မှု ဘယ်သူ အမြတ်ထွက်သလဲ (ဘာသာပြန်)
The Snow on Your Neighbour's Roof
မြန်မာမီဒီယားပေါင်းနုတ်ဖို့ခဲ
Arakan Violence Inquiry Commission STUPIDLY Explains Why Two Muslim Members Ousted but failed to explain keeping the Mass Murderer Rakhine leaders
No Arms, No Legs, No Worries, Mate!
All about the promotion here:
Posted: 11 Nov 2012 09:48 AM PST
Annette Lamothe-Ramos dengan tulisannya yang berjudul "I Walked Around inaBurqa All Day (And I'm Not Muslim)" telah menceritakan pengalamannya memakai jubah dan burqa sewaktu bersiar-siar selama6jam di kota New York.
Annette yang bertugas sebagai fesyen editor diberikan tugas oleh orang atasannya untuk mendalami sendiri pengalaman menjadi orang 'Muslim' untuk seketika dengan memakai pakaian yang menutup aurat.
"My dog Bowie was really confused by my outfit. The only other time I'd seen her this freaked out by me was when I dressed up asapregnant nun on Halloween.
"The final look. We hadn't left my house but I was already bitching about how hot it was. I wanted to go naked under the abaya but since burqas are supposed to be outwear, I wore it overacrop top and the shortest shorts I could find in my closet.
"No one really paid much attention to me except the woman on the bench behind me who was sitting with her children. She dragged them to the other end of the platform when she saw me step onto the train. Whatabitch!" tulis Annette.
Hmu Zaw is bluffing…His wrong information came out first to setapath of propaganda, "Those who fail to support the government to fight the armed invaders would be automatically became traitors". His false news inflamed the hearts and minds of all the Myanmar citizens with Ultra-Nationalism and hatred on the Rohingyas and even on all the Muslims of Myanmar.
His fake propaganda postings came on the first day of widespread Murders. Muslims do not need to use the fake pictures at that point of time as we all got the TERRIBLY clear high resolution pictures of ten Muslims killed in Taungope.
Don't try to twist the facts Hmu Zaw by using U Thein Sein's words which are also one sided and obviously seen as trying to protect the criminals. Please save some bluffs for ICC.
He admitted that he, Hmu Zaw had published false news, with the President's approval, to counter the alleged false news and pictures. We could accept this as telling the truth, accidentally revealing the lies he and his boss' made to save themselves.
Posted: 11 Nov 2012 06:53 AM PST
"Sepanjang 32 tahun saya bertugas dalam PDRM, masalah ini tidak pernah timbul.
Saya bimbang disebabkan masalah ini, wang pencen dan lain-lain (yang terkumpul) sepanjang saya berkhidmat dengan PDRM dibekukan," katanya.
"Saya akan saman pihak terlibat. Kerana kecuaian merekalah saya berhadapan dengan masalah ini. Pihak itu tidak seharusnya hukum saya dengan menyatakan saya tidak layak menyertai PDRM.
In The Quiet Land (Poem)
Posted: 11 Nov 2012 04:25 AM PST
HUKET: A boatload of 112 Rohingya have come ashore to be arrested by local police north of Phuket, Phuketwan learned early today.
The men and boys made land on the beach at Thai Muang,ashort drive north of Phuket in Phang Nga province, about 7.30am yesterday,alocal officer said. The men, aged 18 to 40, are being held at the immigration office in Phang Nga. Their arrival confirms concerns that thousands of Rohingya could flee to sea in coming weeks to escape persecution in Burma, also known as Myanmar.
"They have told us that the boat was one of seven that left Rakhine province in western Burma about the same time," saidapoliceman.
"One of the boats sank with more than 130 people on board. About 1000 people in total were on all the vessels."
Thai Navy patrols have been instructed to "help on" Rohingya boats to prevent men and boys landing in Thailand this sailing season. The season, free of deadly monsoons, began in October and lasts until April.
The "help on" policy, under which Navy patrols supply Rohingya with food and water, medical aid and mechanical help if necessary, is designed to keep the boats from landing.
In January 2009, Phuketwan journalists working with the South China Morning Post newspaper exposed the secret pushbacks by Thai military of boatloads of Rohingya,atactic that led to the deaths of hundreds which has since been replaced by the "help on" policy.
Posted: 11 Nov 2012 03:59 AM PST
"Military guys are rarely as smart as they think they are, and they've never gotten over the fact that civilians run the military." - Maureen Dowd
COMMENT The recent statement by Navy chief Abdul Aziz Jaafar as to the justification of the acquisition of the Scorpene submarines is further evidence that our armed forces is mired in the political quagmire that Umno finds itself in. The controversial purchase, not to mention operational efficiency, of these submarines pales in comparison to the politicisation of our security apparatus, which has reached unprecedented depths unheard of in so-called functional democracies.
Is this evidence of what Prime Minister Najib Razak aspires to as the best democracy in the world? Abdul Aziz (right), if you remember was one of the service chiefs lined up behind (looking rather sheepish) Armed Forces chief General Zulkifeli Mohd Zin when he made an emotional appeal, which also included subtle threats and comments which were unacceptable, not to mention unprofessional, for an officer holding the highest rank in the military to make. He made this appeal when confronted with accusations by retired service personnel of vote/voter manipulation in the armed forces.
The fact that these retired personnel made the accusations atapress conference organised by the opposition should not detract from the fact that these accusations should have immediately been investigated by an independent panel to maintain the integrity of the armed forces.
Access to Scorpene subs
Zulkifeli's characterisation of the actions of these retired personnel as disloyal (treacherous) and haranguing of the opposition was beyond the pale.
Of course, the Armed Forces chief was silent when Perkasa chief Ibrahim Ali hinted that he would be inabetter position to retain his seat if there wasamilitary base in his Pasir Mas constituency. My response to General Zulkifeli's press conference was predictably ignored by the mainstream media and was published byapro-opposition blogger.
Now, before I am accused (beingaformer naval officer) of playing politics, I have never claimed of being anything butaPakatan Rakyat supporter and let us not forget thatapro-regime blogger was allowed access to the submarines, chatted with the crew and published his 'exclusive' in his blog. I guess the Official Secrets Act does not come into play when BN partisans are concerned.
This episode was noteworthy because the defence minister had some other urgent business that day but Penang Chief Minister Lim Guan Eng had no problem observing the operational efficiency of the vessels, which had been questioned in the mainstream and alternative press.
During my tenure onboard the KD Hang Tuah, where I was the executive officer, Abdul Aziz was thenayoung sub lieutenant. What is interesting about Abdul Aziz is that he is the first locally trained officer to be appointed Navy chief (he graduated from the training establishment KD Pelanduk). The late Captain 'Dick' Khoo Tee Chuan built from the ground up the training establishment which started out as the Cadet and Recruit Training Establishment (Cart) and later commissioned as KD Pelanduk. So much for the idea that the non-Malays are not patriotic enough as espoused by Defence Minister Zahid Hamidi. But I digress.
Much has been made of the 1511 statement of Abdul Aziz, but what is worrying as pointed out byaformer senior (rtd) Malay officer from the Ranger Regiment is that the statement itself in all its historical distortions is an overt ploy to play to the racial sentiments of the Malay polity. Or should that be the Umno Malay polity? Do not believe anyone who tells you that the security apparatus ofastate, or any state anywhere in the world, is "apolitical". The armed forces do the bidding of its elected civilian masters. But what they don't do is engage in the political process on behalf of their political masters. This gives the illusion of "apoliticalness" but the reality is to varying degrees, the armed forces in most functional democracies are used as tools by their political masters to further their own political agendas.
In most functional democracies, either the legislative or judiciary act as safeguards to ensure that the military is not suborned to the political process but at the end of the day, most often it is the individual in the military who has to exercise commitment to principle. This is done through training and an understanding of the historical traditions of the role of the military.
In Malaysia, not only has the security apparatus been politicised but after prolonged 'ethnic poisoning' as I like to refer to it as the whole military establishment is considered by Umno as merely an extension of its hegemony.
Our so-called affirmative action policies that are in reality ethnic job placements policy, has resulted in the lopsided racial make-up of our security apparatus, which in turn has been against the non-Malays as evidence that they are not patriotic enough. Umno dogma has replaced the ideals of impartiality, and loyalty to Umno is equivalent to loyalty to king and country. So it should surprise no one that we have former military personnel of one ethnic group reborn as butt dancers disgracing their previous occupation in the name of defending the "honour of the country".
When you have the likes of Ridhuan Tee Abdullah who lectures at the National Defence University and whose books 'Masih Adakah Ketuanan Melayu?' and 'Cabaran Saudara Baru di Malaysia' are launched at the Defence Ministry; I think it's safe to assume that the corridors of Umno power and the halls of the military intersect. Ridhuan's academic specialty is 'Politik dan Kerajaan' and 'Politik Islam'.
But of course, there is more to it than just systemic discrimination. Money playsabig part and gone are the days when you retire from the armed forces and survive on your pension. These days there's good money to be made while serving and once you leave service, lucrative jobs in various government-linked companies (GLCs) await. Full disclosure: I was forabrief period, because of my gunnery specialisation,aconsultant toalocal agent for an international company involved in arms procurement.
I suspect readers understand why no officers of flag rank ever speaks out on issues such as these. The answer is of course because they are indebted to the system. Not only them, but their progeny who hold influential positions in the various GLCs and private companies that their parents served upon retiring.
As one officer of flag rank cynically told me, "You don't expect them to pour sand in their caviar bowls, do you, Thaya?"
I expected this answer. In my experience, senior officers would rather complain privately than make their contempt public. The reason for their demureness is monetary in nature. Understand now, that there are many honourable retired security personnel of various ranks who are not indebted to the Umno system and who make their contempt known in the ballot box. They do not speak out for various reasons. These men and women quietly continue contributing to the country in other capacities much like they did when they were in service.
I never appreciated this Herman Wouk quote from 'The Caine Mutiny' (a book I revisit often) until I left the service and over the years, watched what it had transformed into.
The quote is as follows: "The Navy isamaster plan designed by geniuses for execution by idiots. If you're not an idiot but find yourself in the Navy, you can only operate well by pretending to be one." Malaysiakini
2. A dog gave birth to puppies near the road and was ticketed for littering.
4. The best way to stopacharging bull is to take away his credit card.
5. The eagles club formed an add hawk committee.
6. Biologists have recently produced immortal frogs by removing their vocal cords. They can't croak.
7. A toothless termite walked intoatavern and said, "Is the bar tender here?"
8. The best way to communicate withafish is to drop themaline.
9. Pour hot water downarabbit hole and you getahot cross bunny.
10. Did you hear about the two seeing eye dogs that went onablind date?
11. In the winter my dog wears his coat, but in the summer he wears his coat and pants.
12. It was raining cats and dogs. There were poodles all over the road.
13. What doesaporcupine like to do when playing volleyball? Spike.
14. A cat ate some cheese and waited foramouse with baited breath.
15. When my cat lost her three male kittens, I had to call missing purr sons.
16. The flock of doves decided to stageacoo.
17. Peacocks are meticulous because they show attention to de tail.
18. Horses in the movies only have Bit parts.
19. Whenanew hive is done bees haveahouse swarming party.
20. He boughtadonkey because he thought he might getakick out of it.
21. Two giraffes were inarace. They were neck and neck.
22. Are evil wildebeests bad gnus?
23. I phoned the zoo but the lion was busy.
24. His horse is missingabit. I got it right from the horse's mouth.
25. Whenacow gives birth she not only gives cream, she is de-calf-inated.
Posted: 11 Nov 2012 02:18 AM PST
ရခိုင်အကြမ်းဖက်မှု ဘယ်သူ အမြတ်ထွက်သလဲ (ဘာသာပြန်) နိုဝင်ဘာ၊ ၅ ၊ ၂၀၁၂ M-Media
ဆောင်းပါးရှင်- အလ်ဂျာဇီးရာရဲ့ Asia/Pacific Roving Correspondent Wayne Hay ၏ http://blogs.aljazeera.com/blog/asia/winners-and-losers-myanmar-violence ကို M-Media မှ ဆီလျော်အောင်ဘာသာပြန်ဆိုပါသည်။
ပွင့်လင်းရိုးသားမှုမရှိခြင်း ၊ တရားမျှတမှု့ နှင့် ရှင်းလင်းသေချာသော နိုင်ငံရေး သုံးသပ်ချက်များ မရှိခြင်းတို့ သည် ရခိုင်ပြည်နယ် အကြမ်းဖက်မှုနှင့် တင်းမာမှု များကို ပိုမိုကြီးထွားတောက်လောင် စေပြီး ၊ မြန်မာနိုင်ငံ တွင် ရခိုင်ဗုဒ္ဓဘာသာများနှင့် ရိုဟင်ဂျာ မွတ်စလင်မ်များ ၏ ပြဿနာဖြစ်ပွားမှု့ အကြောင်းအရင်း စုံစမ်း ရှာဖွေခြင်းတွင် များစွာသော လစ်ဟာမှု များကို ဖြစ်စေသည်။
မေလ ကုန်ပိုင်းလောက်တွင် ရခိုင်ဗုဒ္ဓဘာသာအမျိုးသမီးအား မုဒိမ်းကျင့်မှု့ကြောင့် ရိုဟင်ဂျာသုံးယောက် အား ဖမ်းဆီးစီရင် ခဲ့ခြင်းအား ကျွန်ုပ်တို့ သိပြီးဖြစ်သလို တဖန် နောက်ထပ် ငါးရက်အကြာတွင် ရခိုင်ဗုဒ္ဓ ဘာသာများရဲ့ ကလဲ့စားချေမှု့ အနေဖြင့် ရိုဟင်ဂျာလူမျိုး ဆယ်ဦးအားကြမ်းကြုတ်စွာ အမဲဖျက်သကဲ့သို့ သတ်ဖြတ်ခဲ့သည်ကိုလည်း ကျွန်ုပ်တို့ သိပြီးဖြစ်သည်။
(အသတ်ခံရသူ ၁၀ ဦးမှာ ပြည်မ မှ မြန်မာမွတ်စလင်မ်များဖြစ်ပါသည် M-Media)
ထိုလူသတ်မှူများ အတွက် မည်သည့်တစ်စုံတစ်ဦး မှ ဖမ်းဆီးခံရခြင်းမရှိသည့်အပြင် ထိုလူသတ်မှု ၏ နောက်တွင် မြောက်များစွာသော လူတို့သေဆုံးခြင်း၊ ထောင်ပေါင်းများစွာသော နေအိမ်များ နှင့် အခြား အဆောက်အဦးများ မီးရှို့ခံရခြင်းနှင့် လူပေါင်း တစ်သိန်းခန့် အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ရခြင်းတို့ဖြင့် အတိပြီးသော အကြမ်းဖက်ဖြစ်ရပ်များ ဆင့်ကဲ ဖြစ်ပွါးခဲ့လေသည်။
အစိုးရ၏ တုန့်ပြန်မှု သည် အားနည်းလှသောကြောင့် နိုင်ငံရေးစနစ်အတွင်းပါဝင်လျှက်ရှိသူများသည် ပဋိပက္ခတွင်ပါဝင်ပတ်သက်မှုရှိသည်ဟု ယုံကြည်သူများ၏ ယုံကြည်မှုကို အားကောင်းစေသည်။
အကယ်၍သာ နိုင်ငံ့ အာဏာပိုင်များ / အာဏာပိုင်တို့နှင့်ပေါက်ရောက်သူများသည် ပဋိပက္ခအား အမှန်တကယ်ရပ်တန့်စေလိုခဲ့ပါလျှင်၊ အစကနဦးကပင် ရပ်တန့်နိုင်မည်သာ။
ယခင်စစ်အစိုးရ သည် ထင်သာမြင်သာသော ပဋိပက္ခများအား ရက်စက်စွာ နှိမ်နင်းခဲ့သည်မှာ မကြာသေးပေ။ ယခုအစိုးရ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသည် အရပ်သားအစိုးရ ဖြစ်သော်လည်း တိုင်းပြည်အား လည်ပတ်နေစေသူများတွင် ယခင်လူများထဲမှ အများအပြားပါဝင်လျှက်ရှိသည်။
အစိုးရသည် ယခင်က ပြုဖူးသကဲ့သို့၊ ရခိုင်ပြည်နယ် ၏ လမ်းများပေါ်တွင် စစ်သားများဖြင့် ချက်ခြင်း ဖြည့်တင်းနိုင်ပေသည်။ ရခိုင်ဒေသတစ်ဝှမ်းတွင် လုံခြုံရေးတိုးမြှင့်ချထားသည် ဟု ပြောကြားသော်လည်း မျက်မြင်အရဆိုလျှင် စစ်သားဦးရေသည် အလွန့် အလွန်နည်းပါးလှပါသည်။
၎င်းပဋိပက္ခသည် ရိုးရှင်းသော လူမျိုးရေး တင်းမာဆူပူမှု မျှ မဟုတ်ဆိုသည် ကို ရည်ညွှန်းသည့် နိုင်ငံရေးဝေဝါးမှု များရှိနေသည်။
မြန်မာ့အာရုံသစ် စနစ် အတွင်း၌ အာဏာရှင်အမာခံများ ရှိနေသေးသည့် အပြင် ၊ ဒီမိုကရေစီသည် စစ်တပ် ၏ အာဏာ နှင့် လွှမ်းမိုးမှုတို့အား ဖယ်ရှားပစ်သည်ဟု မြင်ကြသော စစ်တပ်သည်လည်း ရှိနေသေးသည် ဆိုသည်ကို လွယ်ကူစွာ မေ့ပျောက်မရနိုင်ပါ။
လက်နက်ကိုင်တပ်များသည်သာလျှင် မြန်မာနိုင်ငံ ၏ ငြိမ်းချမ်းရေးကို ထိန်းသိမ်းနိုင်သူများ ဖြစ်သည်ဟု ၎င်းတို့က စောဒကတက် အငြင်းဝင် ချင်ကြမည်။ ပဋိပက္ခ ကို စတင်ဖန်တီးမှ မဟုတ်၊ ပဋိပက္ခအား ချုပ်ငြိမ်းရပ်တန့်ရန် မပြုခြင်း နှင့် ဖြစ်သင့်သည်ထက် ပိုမိုကြီးထွားအောင် အားပေးအားမြှောက် ပြုခြင်းသည်လည်း စစ်တပ်၏ လုပ်ရပ် အား ထင်ရှားစွာသက်သေပြနိုင်ခြင်းမည်ပါသည်။
ယခင်စစ်တပ်ဗိုလ်ချုပ်များ၊ အာဏာရှင်အမာခံများ ဦးဆောင် ပါဝင်သည့် တိုင်းပြည်၏ အကြီးဆုံး နိုင်ငံရေးပါတီဖြစ်သည့် ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ သည် စစ်တပ်နှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်လျှက်ရှိသည်။
၎င်း ပြည်ခိုင်ဖြိုး (USDP) ပါတီ၏ အကြီးမားဆုံးပြဿနာမှာ ဒေါ် အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးဆောင်သော အတိုက်အခံပါတီ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (NLD) ပင်ဖြစ်သည်။
NLD ပါတီသည် အလွန်လူကြိုက်များသော ပါတီဖြစ်သည်။ ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲ ၌လည်း NLD ပါတီက အနိုင်ရရှိခဲ့ပြီးနောက် စစ်တပ် က အာဏာသိမ်းခဲ့သည်။ ၂၀၁၂၊ ဧပြီလ ရွေးကောက်ပွဲတွင်လည်း NLD ပါတီသည် လွှတ်တော်အမတ်နေရာ အများဆုံးအနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ အကယ်၍ ၂၀၁၅ အထွေထွေရွေး ကောက် ပွဲသည်လွတ်လပ်၍ တရားမျှတသောရွေးကောက်ပွဲဖြစ်မည်ဆိုပါက၊USDP ပါတီသည်အခက်ကြုံရမည်ဖြစ် သည်။
အထက် ရေးသား ဖော်ပြချက်များသည် လက်ရှိဖြစ်ပွါးနေသော ရခိုင်တင်းမာမှုများနှင့် လုံးဝ မပတ် သက်သယောင်ထင်ရသော်လည်း၊အချို့သောသူများသည် ရခိုင်အကြမ်းဖက်မှု အား ကြိုးကိုင် အခွင့်ကောင်းယူ၍ ၎င်းတို့၏ လက်ရှိ ရာထူးအနေအထားများကို မြဲမြံအောင် ပြုလုပ်နေကြရုံမက ယခင်က ရှိခဲ့သော ၎င်းတို့၏ အနေအထားကို ပြန်လည်ရယူလိုကြသည် ဟု မြန်မာနိုင်ငံ၏ လူမှုမီဒီယာ များတွင် ဇွန်လဆန်း ပိုင်း လောက်ကတည်း က ယေဘုယျ ခန့်မှန်းတွက်ကိန်းများ ရှိနေခဲ့သည်။
၎င်းတွက်ကိန်း ၏ သော့ချက်မှာ USDP ပါတီ ၏ အရာရှိဟောင်း ၊ ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်း အောင်သောင်း နှင့် မွတ်စလင် ဆန့်ကျင်ရေး နာမည်ကြီးသော ရဟန်းပျို (ဝီရသူ မန္တလေး) တို့၏ လျှို့ဝှက်တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးမှုပင် ဖြစ်သည်။
ဝီရသူသည် မန္တလေးမြို့တွင် ၂၀၀၁ ၌ဖြစ်ပွါးခဲ့ သော ဗုဒ္ဓဘာသာ နှင့် မွတ်စလင်တို့ ၏ အဓိကရုဏ်းတွင် ပါဝင်ကျူးလွန်မှုကြောင့် ထောင် ဆယ်နှစ်မက ကျခံ ဖူးသူဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် အစိုးရသစ်၏ လွတ်ငြိမ်း ချမ်းသာခွင့် ကြောင့် ယခင်နှစ်ကုန်ပိုင်း က ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသူဖြစ်သည်။
USDP ပါတီ အထိနာခဲ့သည့် ဧပြီလ ရွေးကောက်ပွဲ အပြီးတွင် အာဏာရှင်ဟောင်းသန်းရွှေနှင့် အလွန်နီးစပ် သည် ဟု လူသိများသော အောင်သောင်း က ဝီရသူ အားတွေ့ဆုံခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
နိုင်ငံ၏ အာဏာရပါတီ ခေါင်းဆောင် တစ်ဦး နှင့် မွတ်စလင်ဆန့်ကျင်ရေးကြောင့် လူသိများသော သာမန် ဘုန်းကြီးရဟန်း တစ်ဦးတို့၏ သမားရိုးကျပုံမှန် မဟုတ်သော တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ ဓာတ်ပုံများပေါ်ထွက် ခဲ့သည်။
၎င်းတို့အဘယ်ကြောင့် တွေ့ဆုံ ခဲ့ပါသနည်း? မည်သည့်ရှင်းလင်းဖြေရှင်းချက်မျှ မရှိခဲ့ပါ။ သို့ရာတွင် ရခိုင် အကြမ်းဖက်မှုစတင်ပြီးနောက်၊ ရိုဟင်ဂျာများသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ တရားဝင်နိုင်ငံသားများ မဟုတ်၊ ၎င်းတို့ အား ဖမ်းဆီးပြီးနောက် အခြားနိုင်ငံသို့ ပို့ဆောင်ရမည် ဟူသော သမ္မတသိန်းစိန် ၏ အဆိုအား ထောက်ခံ ရန် လမ်းများပေါ်သို့ထွက်၍ ချီတက်ကြသည့် ဘုန်းကြီးများ ၏ ရှေ့တန်းတွင် ဝီရသူသည် ဦးစီးဦးဆောင် အဖြစ် ပါဝင်ခဲ့လေသည်။
အနောက်ဖက် (ရခိုင်) ရှိ တိုက်ခိုက်မှုများကြောင့် USDP မည်သည့်အကျိုးအမြတ်ရရှိသနည်း?
မြန်မာနိုင်ငံသည် ရုတ်ချည်းနိုင်ငံရေး အပြောင်းအလဲအတွက် အဆင်သင့်မဖြစ်သေးကြောင်း မငြိမ်မသက် မှုများက သက်သေဖြစ်သည် ဟု အာဏာရှင်အမာခံ များက ပြောကောင်းပြောနိုင်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံသည် တက်ကြွစွာလှုပ်ရှားရာ၌ အတွေ့အကြုံများစွာရှိပြီး၊ နိုင်ငံရေးသမား အတွေ့အကြုံနည်း သော သူမျိုးကို အလိုမရှိဘဲ၊ တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်ရာ၌ အတွေ့အကြုံရင့်ကျက်သော တည်ငြိမ်လက်ပိုင်ရှင် များကိုသာ အလိုရှိသည်ဟုထိုသူများ ကပြောကောင်းပြောကြပေလိမ့်မည်။
တိုက်ခိုက်မှု ပဋိပက္ခများသည် အောင်ဆန်းစုကြည် အား အလွန်ခက်ခဲသော အခြေအနေသို့ ရောက်ရှိ စေသည်။ သူမသည် လူ့အခွင့်အရေး၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး နှင့် တရားမျှတမှု အတွက် ကြာရှည်စွာ တိုက်ပွဲ ဝင်လာသူဖြစ်သည်။ ယခုမူ သူမသည် လွှတ်တော် အမတ် တစ်ဦးအဖြစ် စနစ်အတွင်းအလုပ်လုပ်နေရသူ ဖြစ်နေပြီး၊ သူမ၏ နိုင်ငံမှ ရာထောင်ချီသော ပြည်သူ အပေါင်းတို့သည် သူမ၏ နိုင်ငံ ၌ပင် တစ်နေ့တစ်ခြား ခွဲခြားဆက်ဆံခံနေရချိန်တွင် သူမ အနေဖြင့် ဆောင်ရွက်စဲ လုပ်ငန်းများကို ဆက်လက်ဆောင်ရွက် သွားရန် ကမ္ဘာ က သူမအား မျှော်လင့်လျှက်ရှိပေသည်။
သူမ၏ တုန့်ပြန်မှုများမှာ မည်သို့မျှ အရာမထင်ပေ။ သူမသည် မည်သည့်ဘက်ကိုမျှ ဘက်လိုက် ထောက်ခံမည်မဟုတ်၊ မည်သူကောင်း၏၊ မည်သူဆိုး၏ ဆိုသည်ကို ဆုံးဖြတ်သည့် "လူ့စရိုက်အား ဦးဆောင်မှု" မျိုးကိုလည်း သူမကျင့်သုံးမည် မဟုတ်ဟူသောအားနည်း ပျော့ညံ့သည့် ပြောကြားချက်အချို့ ကိုသာ ထုတ်ပြနိုင်ခဲ့သည်။
အပြောင်းအလဲကို မလိုလား ကြ သော USDP ပါတီ နှင့် စစ်တပ် လက်ဟောင်းကြီးများသည် NLD ခေါင်း ဆောင်အနေဖြင့် လက်ရှိအခြေအနေ အားမည်သို့ကိုင်တွယ်မည်နည်း ဆိုသည်ကို ပျော်ရွှင် စွာကြည့်နေကြ ပေလိမ့်မည်။
ရိုဟင်ဂျာ များ အားထောက်ခံ၍ ပြောကြားရန် နိုင်ငံခြားအစိုးရများနှင့် လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့အစည်းများ ၏ ဖိအားပေးမှု များ အောက်တွင် သူမရောက်ရှိမည်ဆိုသည်ကို ၎င်းတို့သိရှိကြပြီး၊ အကယ်၍ သူမသည် ရခိုင် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များအား ဆန့်ကျင်ပြောကြားပါ က ပြည်တွင်ထောက်ခံမှုများကိုဆုံးရှုံး ရမည့် အန္တရာယ် ရှိ ကြောင်းကို လည်း သူမက သိရှိနေပေသည်။
ပြည်တွင်းထောက်ခံမှု ဆုံးရှုံးခြင်းသည် ထောက်ခံမဲဆုံးရှုံးခြင်းပင်။ ဒီမိုကရေစီ အရေးလှုပ်ရှားသူ တစ်ဦး ၏ ဘဝထက်စာလျှင်၊ စစ်အာဏာရှင် နိုင်ငံအဖြစ်မှ ပြောင်းလဲခဲ့သော ပူပူနွေးနွေးလတ်လတ်ဆတ်ဆတ် နိုင်ငံ ရှိ နိုင်ငံရေး သမားတစ်ဦး ၏ ဘဝ သည် မည်သို့မည်နှယ် ရှိသည်ကို သူမ စတင် သိရှိခံစားနေရပေ လိမ့်မည် ဖြစ်နိုင်၏။
ရခိုင်အရေးအခင်းနောက်ကွယ် အမှန်တရား အား ကျွန်ုပ်တို့ မည်သည့်အခါမျှ မသိရှိနိုင်မည်မှာ ဖြစ်ကောင်း ဖြစ်နိုင်သည်။ သို့သော် တိုင်းပြည် ၏ ထိုအစိတ်အပိုင်း ရှိ မွတ်စလင် နှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များသည် ဆုံးရှုံး သူများ သာဖြစ်ကြသည်ကို ကျွန်ုပ်တို့သိရှိကြပေသည်။ အဆိုပါ အရေးအခင်းများသည် ဒီမိုကရေစီမြန်မာ နိုင်ငံ ၏ နေ့သစ်ဦးများ၌ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည် ကို လည်းကောင်း၊ အပြောင်းအလဲကိုမလိုလားသော အင်အားစု များသည် တိုင်းပြည်၏ အနာဂတ် အားဆုံးဖြတ်ရာတွင် ကြီးမားသောအခန်းကဏ္ဍမှ ယနေ့တိုင်ပါဝင် လျှက်ရှိကြောင်း နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝိုင်း က လေ့လာလျှက်ရှိနေမည် ဖြစ်ပေတော့သည်။
Posted: 11 Nov 2012 01:45 AM PST
မကြာခဏဆိုသလိုပင် ပြည်တွင်းနေအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တို့သည် မေးခွန်းတစ်ခုနှင့် ကြုံကြရလေ့ ရှိကြပါသည်။ "အကယ်၍သာ မွတ်စလင်မ်နိုင်ငံတစ်ခုခုနှင့် မြန်မာပြည် စစ်ဖြစ်ခဲ့ပါက ပြည်တွင်းနေ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တို့အနေနှင့် ဘယ်ဘက်ကပါကြမှာလဲ" ဟူသည့်၊ သို့တည်းမဟုတ်လည်း ယင်းသဘော ဆောင်သည့် အူတိအူကြောင် မေးခွန်းဖြစ်သည်။
မေးသူကတော့ ပြည်တွင်းနေအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေ တိုင်းပြည်အပေါ် သစ္စာမရှိနိုင်ရာ ဟူသည့် အယူစွဲဖြင့် မွတ်စလင်မ်တို့ ချောင်ပိတ်မိမည့် မေးခွန်းဟု တရားသေယူဆ၊ ကလေးတွေးတွေးကာ မိမိတို့ကိုယ်ကို ဟုတ်လှပြီထင်လျက် မေးပုံရသည်။ ဘယ်ဘက် လိုက်မှာလဲတဲ့။ တကယ်တမ်းတော့ မေးခွန်းက လက်တွေ့ မဟုတ်သည် မဖြစ်နိုင်သည်ကို အဟုတ်လုပ်လျက် မေးထားခြင်းဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် မည်သည့်နိုင်ငံနှင့်မျှ စစ်မက်ဖြစ်ပွားရန် အကြောင်းရင်းမရှိ၊ ပြည်တွင်းနေအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တို့အား အကဲစမ်းသည့် မေးခွန်းသက်သက်သာဖြစ်သည်။
ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာ ဖြေပါမည်။ အစ္စလာမ့်သွန်သင်ချက်အရ မွတ်စလင်မ်မှန်ပါက အရေးကိစ္စမှန်သမျှတွင် "ကြားနေနှုတ်ဆိတ်ကာ ယုန်ကလေးနှာစေး" နေခွင့်မရှိပါ။ မွတ်စလင်မ်မှန်ပါက ပြတ်ပြတ်သားသား ဘက်လိုက်ကို လိုက်ရမည်မှာ တာဝန်ဖြစ်ပါသည်။
ဘက်လိုက်ရန် ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာသွန်သင်ထားသော မွတ်စလင်မ်တို့၏ ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်လာ အဆုံးအမကို ဖော်ပြပါမည်။
" အို … သာသနာကို သက်ဝင်ယုံကြည်ကြသူတို့ …
သင်တို့သည် မိမိတို့ ကိုယ်ကျိုးနှင့် ဆန့်ကျင်သည်ဖြစ်စေ၊
သွေးတော်နီးစပ်သူ ဆွေမျိုးတို့နှင့် ဆန့်ကျင်သည်ဖြစ်စေ၊
တရားမျှတမှုဘက်၌သာလျင် ထာဝစဉ်မြဲမြံစွာ တည်တံ့သူများ၊
အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ကိုသာထောက်ထား၍ သက်သေခံသူများ ဖြစ်ကြလေကုန်။…
သင်တို့သည် တရားမျှတမှုမှ တိမ်းစောင်းမသွားစေရန် မိမိတို့စိတ်အလိုဆန္ဒကို မလိုက်ကြကုန်လင့်။…"
ဤမျှဆိုလျင်ပင် အစ္စလာမ်က မည်သို့ ဘက်လိုက်ခိုင်းထားကြောင်း နားလည်သဘောပေါက်မည် ထင်မ်ိပါသည်။ အမှန်တရား၊ ပရမတ္တ သစ္စာတရားဘက်သို့ ပြတ်ပြတ်သားသား ရဲရဲဝံ့ဝံ့ လိုက်ခြင်းသည်ပင် မွတ်စလင်မ့်ဂုဏ်ရည် ဖြစ်ပါသည်။ သစ္စာတရားနှင့် ယှဉ်လာလျင် မိမိတို့ ကိုယ်ကျိုးနှင့် ဆန့်ကျင်သည်ဖြစ်စေ ဘက်လိုက်ပါမည်။ မိဘနှစ်ပါးနှင့် ဆန့်ကျင်သည်ဖြစ်စေ ဘက်လိုက်ကြပါမည်။ မိမိ၏ နီးစပ်သူ ပတ်သက်ရာပတ်သက်ကြောင်းတို့ မနှစ်သက်နိုင်သည် ဖြစ်ပါစေ၊ အမျိူးတူသူနှင့် ဆန့်ကျင်သည်ဖြစ်နေပါစေ မှန်သည့်ဘက်လိုက်ကြရပါမည်။ ဘာသာ၊သာသနာတူသူနှင့် ဆန့်ကျင်ရာဆန့်ကျင်ကြောင်း ဖြစ်နေပါစေ မှန်ရာဘက်လိုက်ကြရပါမည်။ ဆင်းရဲသားလူ့နင်းပြား ပစ္စည်းမဲ့လူတန်းစား အမြဲသာစေရမည် ဟူသော လက်ဝဲယိမ်း ဝါဒကိုလည်း မကျင့်သုံးဘဲ အမှန်ဘက်လိုက်ကြရပါမည်။ သြဇာအာဏာ ဂုဏ်ဒြပ်ကြီးမားနိုင်သော ရေပေါ်ဆီ ခရိုနီ သူဌေးများနှင့် ထိပ်တိုက်တွေ့ကလည်း အဂတိတရား ကင်းစွာဖြင့် သစ္စာတရားဘက် လိုက်ကြရပါမည်။
တမန်တော်မြတ်ကလည်း မတရားမှု တစ်စုံတစ်ရာနှင့်ကြုံလာပါက ပထမဆုံးအနေဖြင့် ကာယကံမြောက် ဆန့်ကျင်ရန်၊ ထိုသို့ မဖြစ်နိုင်သည့် အခြေအနေဆိုပါက ဒုတိယအဆင့် နှုတ်အားဖြင့် ကန့်ကွက်ဆန့်ကျင်ပြောဆိုရန်၊ နှစ်မျိုးလုံးအတွက် အခက်တွေ့ပါက အနိမ့်ဆုံးအဆင့် မိမိစိတ်တွင်းမှ ရှုတ်ချဆန့်ကျင်လျက် အဆိုပါဖြစ်ရပ်ကို အားပေးအားမြောက်ပြုနေသည့် အသိုင်းအဝိုင်းမှ ကင်းဝေးစွာနေကာ အမှန်တရားထွန်းကားရေးအတွက် ဆုမွန်တောင်းရန် သွန်သင်ထားပါသည်။
သစ္စာတရားဘက်သို့ မှန်မှန်ကန်ကန် ရပ်တည်နိုင်ရန်အတွက် ပထမအဆင့်အနေဖြင့် မည်သည်က အမှန်တရားဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာသိစေရန် ကြိုးပမ်းအားထုတ် လေ့လာရပေမည်။ မိမိသေချာမသိပါဟု ဆိုခွင့်မရှိပါ။ ဤသည့်အတွက်လည်း မိမိ၏ လူမျိုးစွဲ၊ ဘာသာစွဲ၊ အတ္တစွဲ၊ ဆရာစွဲ၊ အယူစွဲတို့ကို အခြေမခံဘဲ တရားမျှတစွာ လေ့လာဆုံးဖြတ်ကြရန်လည်း အောက်ပါအတိုင်း လမ်းညွှန်ထားပါသည်။
ထို့ပြင် သတင်းစကားတစ်ခုကို စာရိတ္တဖောက်ပြန်သူ မသူတော်တစ်ဦးဦးက သယ်ဆောင်လာလျင် မသိဘဲနှင့် လူ့အစုအဝေးတစ်ရပ်ကို အန္တရာယ်မပြုမိစေရန် ဆန်းစစ်ကြဖို့၊ သို့မဟုတ်လျင် မိမိတို့ ပြုမူမိခဲ့သည်အတွက် ကြေကွဲ နောင်တရရမည် ဟူ၍ ဆုံမသွန်သင်ထားသည်။ (ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန် ၄၉း၆)
အစ္စလာမ်က မိမိ တစ်ကိုယ်ရည်အတွက် မေတ္တာထားကာ ငုံ့ခံခိုင်းထားသလို အများအတွက်၊ လူ့အစုဝေးအကျိုးနှင့် ယှဉ်လာပါမူ သစ္စာတရားအတွက် တုန့်ပြန်ခိုင်းထားသည်။
အစ္စလာမ်၏ လမ်းပြပုဂ္ဂိုလ် မဟာတမန်တော်မြတ်၏ အတ္ထုပ္ပတ္တိကို လေ့လာကြည့်လျင် မိမိတစ်ကိုယ်ရည်အား ရန်ပြုသူ၊ စော်ကားသူ၊ မတရားပြုမူသူ၊ စွပ်စွဲသူမှန်သမျှအား မေတ္တာထား ခွင့်လွှတ်ခဲ့သည်။
သစ္စာတရားနှင့် ယှဉ်လာလျင်မူ စည်းစိမ်ဥစ္စာ အာဏာဖြင့် စည်းရုံးလာသူတို့အား သင်တို့အနေဖြင့် ကျွန်ုပ်၏ လက်တစ်ဘက်တွင် နေမင်း၊ ကျန်လက်တစ်ဘက်တွင် လမင်း ပေးနိုင်စေကာမူ အမှန်တရားအတွက် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း ပြတ်ပြတ်သားသား ဆိုခဲ့သည်။
တမန်တော်မြတ်သည် ပင်ကိုယ်သဘောအရ အစဉ်သည်းခံခွင့်လွှတ်ကာ အေးချမ်းစွာနေတတ်သူ ဖြစ်သော်လည်း အများလူထု ၁၃နှစ်ကျော် နှိပ်စက်ငြှင်းပမ်း သတ်ဖြတ်မှုများ ခံရပြီးနောက်ဆုံးတွင် ခုခံစစ်အဖြစ်သစ္စာတရားအတွက် တုန့်ပြန်လျက် ပြန်လည် တိုက်ခိုက်ခဲ့ရသည်။ မတရားသဖြင့် ညှဉ်းပမ်းနှိပ်စက်ခြင်းသည် သတ်ဖြတ်ခြင်းထက်ပင် ဆိုးရွားလှသည် မဟုတ်ပါလော။ (ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန် ၂း ၁၉၁)
ဤစစ်ပွဲအခြေအနေတွင်ပင် ယခင်က မရှိခဲ့ဖူးသည့် တရားမျှတသည့် စစ်စည်းမျဉ်းများ ချမှတ်ခဲ့သည်မှာ သမိုင်းတွင် အထင်အရှားဖြစ်ပါသည်။ စစ်နှင့် တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်ခြင်းမရှိသောသူများဖြစ်သည့် ကလေးသူငယ်များ၊ အမျိုးသမီးများအား မထိပါးရန်၊ စစ်မြေပြင်ဝန်းကျင်ရှိ ရေတွင်းရေကန်နှင့် သစ်ပင်များအား မဖျက်ဆီးရန်၊ စစ်သုံ့ပန်းများအား နှိပ်စက်သတ်ဖြတ်ခြင်း မပြုရန်၊ စစ်သုံ့ပန်းများအနေဖြင့် လျော်ကြေးပေးခြင်းဖြင့် ဖြစ်စေ စာမတတ်သူမွတ်စလင်မ်၁၀ဦးအား စာသင်ကြားပေးခြင့်ဖြစ်စေ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပြုရန် စသည့် လူ့အခွင့်အရေးကို အခြေခံသော တရားမျှတမှုကို ကမ္ဘာ့သမိုင်းတွင် ပထမဆုံးစတင်ခဲ့သူမှာ သစ္စာဝါဒီ မွတ်စလင်မ်များ ဖြစ်ကြသည်။
ခုခံစစ်ပွဲတစ်ခုအတွင်းကြုံခဲ့သည့် ဖြစ်ရပ်မှန်တစ်ရပ်ကို ပြန်လည် တင်ပြပါမည်။ မွတ်စလင်မ် စစ်သည်တစ်ဦင်္းက ရန်သူ စစ်ခေါင်းဆောင်အား အနိုင်ရကာ ဓားဖြင့်ခုတ်ပိုင်းရန် ရွယ်လိုက်စဉ်တွင် ထိုရန်သူက မွတ်စလင်မ်စစ်သည်အား တံတွေးနှင့် ထွေးလိုက်ပါသည်။ ထိုအခါ မွတ်စလင်မ်စစ်သည်က ဒေါသတစ်ကြီးဖြစ်သွားသော်လည်း ထိုရန်သူအား ဆက်လက်တိုက်ခိုက် ခုတ်ပိုင်းခြင်းမပြုတော့ဘဲ လွှတ်ပေးလိုက်ရာ မိမိကိုကိုယ် သေသူအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးသားရန်သူခေါင်းဆောင်က မယုံကြည်နိုင်စွာဖြင့် အကြောင်းရင်းကို မေးကြည့်ပါသည်။ မွတ်စလင်မ်စစ်သည်အနေဖြင့် မိမိသည် မိမိအတ္တအတွက်မဟုတ်ဘဲ သစ္စာတရားအတွက်သာ တိုက်ပွဲဝင်နေခဲ့သည်ဖြစ်ပြီး မိမိမျက်နှာ တံတွေးအထွေးခံရသဖြင့် စိတ်ဆိုးနေချိန်တွင် ဆက်လက်ခုတ်ပိုင်းပါက မိမိအတ္တအတွက် လူသတ်ရာရောက်မည်ဖြစ်သောကြောင့် ဤသည်ကို မလိုလား၍ ဆက်မတိုက်၊ မသတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဖြေကြားခဲ့ပါသည်။ ဤဖြစ်စဉ်က အဆိုပါရန်သူ၏ စိတ်နှလုံးကို ပြောင်းလဲစေလျက် သူကိုယ်တိုင် မွတ်စလင်မ်ဖြစ်လာခဲ့ပါသည်။ ဤသည်မှာ စစ်မြေပြင်တွင်တောင်မှ အမှန်တရားအတွက် သက်သက်သာ တိုက်ပွဲဝင်သူ သစ္စာဝါဒီ မွတ်စလင်မ်တို့၏ ဥပမာ တစ်ခုပင်။
နောက်ဆုံး ရန်သူတို့ အရေးနိမ့်သွားချိန် စစ်ပွဲများအားလုံး အဆုံးသတ်သွားရသည့် မက္ကာဟ်ရွှေမြို့တော် အောင်နိုင်သည့်ကာလတွင်မူ မွတ်စလင်မ်များအနေဖြင့် ရန်သူအားလုံးတို့အား သွေးမြေမကျစေရဘဲ အကြွင်းမဲ့ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် ပေးသည်။ တမန်တော်မြတ်သည် မိမိအားကိုးချစ်ခင်ရသော ဦးရီးတော်ကို သတ်သူကိုပင် အပြစ်မယူဘဲ ခွင့်လွှတ်ပေးခဲ့သူ ဖြစ်ပါသည်။
ဤမျှလောက် ရှင်းလင်းပြီးလျင် အထက်ပါမေးခွန်းအတွက် ထပ်ဖြေပါမည်။
မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် မွတ်စလင်မ်နိုင်ငံတစ်ခုခုနှင့် မျှသာမဟုတ် ထိုင်းနိုင်ငံကဲ့သို့သော ဗုဒ္ဓဘာသာ နိုင်ငံနှင့်ဖြစ်စေ၊ အခြား ခရစ်ယာန်နိုင်ငံနှင့်ဖြစ်စေ၊ ဂျူးဘာသာဝင်တို့နှင့်ဖြစ်စေ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ စစ်မက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါက ပြည်တွင်းနေ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တို့သည် မှန်သည့်ဘက်လိုက်ပါမည်။ မြန်မာပြည် ခုခံစစ်အတွက်ဆိုလျင် လိုအပ်ပါက ဗလီရှေ့ဆောင်ဆရာများ အပါအဝင်ပင် ရှေ့တန်းမှ ပါဝင်ကြရပါမည်။
ရှေးယခင် အင်္ဂလိပ်နယ်ချဲ့မှုကို တော်လှန်စဉ်ကလည်း မွတ်စလင်မ်စစ်တပ်များ အမြောက်အမြား ပါခဲ့သည်ကို မသိကြလေသလော … မေ့သယောင် ဟန်ဆောင်နေကြသည်လော။
သို့သော် မတရား ကျူးကျော်စစ်အတွက်ဆိုပါမူ…။
တစ်ချိန်ကအမေရိကန်နိုင်ငံသည် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံသို့ စစ်ချီခဲ့ဖူးပါသည်။ ထိုစဉ်က တိုင်းသူပြည်သား များလည်း ထိုကျူးကျော်စစ်အတွက် စစ်မှုထမ်းကြရပါသည်။ အမေရိကန်နိုင်ငံသား သစ္စာဝါဒီတစ်ဦးဖြစ်သူ လက်ဝှေ့ချန်ပီယံ ကပ်စီးယပ်စ်ကလေး ခေါ် မုဟမ္မဒ်အလီသည် ကျူးကျော်စစ်ကို ဆန့်ကျင်သူ ဖြစ်ရာ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ဆန့်ကျင်လျက် စစ်မှုမထမ်းခဲ့ပါ။ အကျိုးဆက်အနေဖြင့် လက်ဝှေ့ချန်ပီယံလက်မှတ် ပြန်အပ်ရမည်ဆိုသည်ကို နှောင့်နှေးခြင်းမရှိပြန်အပ်ကာ လက်ဝှေ့ချန်ပီယံဘွဲ့ကို နောက်တစ်ကြိမ် ကြိုးဝိုင်းမှာ ပြန်လည်အရယူခဲ့သည့် သာဓက ရှိပါသည်။
မွတ်စလင်မ်ညီနောင် ညီအစ်မ မှန်သမျှ အစ္စလာမ့်သွန်သင်ချက်နှင့်အညီ အမှန်တရားအတွက် ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ဘက်လိုက်တတ်သူ၊ ဘက်လိုက်ရဲသူ၊ ဘက်လိုက်ခွင့်ရကြသူ သစ္စာဝါဒီများ ဖြစ်ကြပါစေသား။
M-Media သို့ ဆောင်းပါးရှင် ကိုကျော်မိုးအောင် ပေးပို့လာသည့် ဆောင်းပါးဖြစ်ပါသည်။
KUALA TERENGGANU, 10 Nov — Anggota Veteran Umno Malaysia harus sentiasa berada dalam keadaan bersedia untuk membantu parti menghadapi pilihan raya umum ke-13 yang akan diadakan pada bila-bila masa. Pemangku Pengerusi Veteran Umno Malaysia Datuk Mohd Zahid Sirat berkata ini kerana pilihan raya umum akan datang bukan sahaja menentukan 'hidup mati' Umno tetapi juga hala tuju bangsa Melayu.
"Pembangkang yang diterajui DAP beria-ia untuk menumbangkan kerajaan BN dan merampas Putrajaya seterusnya mengambil alih pemerintahan di negara ini. "Kalau ini berlaku, segala yang dinikmati kaum pribumi selama ini dikhuatiri akan terjejas dan terhapus sama sekali," katanya ketika menyampaikan ucapan dasar pada Perhimpunan Agung Tahunan Veteran Umno Malaysia ke-5, di sini hari ini.
"Matlamat kita untuk membantu pucuk pimpinan bagi memartabatkan bangsa Melayu dan mencapai kejayaan cemerlang di dalam dan luar negara," katanya.
"Melayu dan bumiputera mesti bersatu dengan mengenepikan segala fahaman atau ideologi demi mengekalkan pemerintahan dan ketuanan Melayu, mendukung tonggak kedaulatan raja-raja serta mempertahankan kesucian agama Islam," katanya. Beliau turut meluahkan rasa bimbang dengan pelbagai gejala negatif termasuk tindakan cuba menodai kesucian agama Islam oleh pihak tertentu.
Posted: 10 Nov 2012 11:30 PM PST
Fellow business people grew tired of the man's continual criticism and nitpicking comments about the windows.
One day over coffee, the businessman carried the subject just too far.
Before leaving,afellow store owner suggested the man get his own windows washed.
နိုဝင်ဘာ ၁၁ ရက်၊ ၂၀၁၂
Eleven media group က နိုဝင်ဘာ ၃ နေ့စွဲနဲ့ ရခိုင်အရေးက နောက်ပြန်လှည့်သွားစေနိုင်သလား ဆောင်းပါးကို ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီဆောင်းပါးက အီးအမ်ဂျီရဲ့ အာဘော်လည်း ဖြစ်တဲ့အကြောင်း ရေးသားထားပါတယ်။ ဆောင်းပါးရှင်ကတော့ ဇွဲဝေယံ (ခ) ၁၈ နှစ်သား အယ်ဒီတာ ဇေယျနန္ဒ ဆိုသူပါ။
အဲဒိဆောင်းပါးရဲ့ မူရင်းခေါင်းစဉ်ကတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အစွန်းရောက်ဘာသာရေးအယူအဆ ပေါ်ထွန်းနေလား ပဲဖြစ်ပါတယ်။ သို့ပေမယ့် အလဲဗင်းမီဒီယာဂရုရဲ့ စီနီယာအယ်ဒီတာကြီးတွေက ဒီခေါင်းစဉ်ကိုတောင် ဂဃနဏမစိစစ်ကြဘဲ တရားဝင်ဖော်ပြလိုက်ပြီးခါမှ တစ်စုံတစ်ရာကိုစဉ်းစားမိလေရော့သလားမသိ၊ မိနစ်အနည်းငယ်ကြာတော့ "ရခိုင်အရေးက နောက်ပြန်လှည့်သွားစေနိုင်သလား " ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်ကို ပြောင်းပစ်လိုက်ပါတယ်။ ဒါဟာ ပရိုဖက်ရှင်နယ် မီဒီယာတစ်ခုရဲ့ စံနှုန်းမဟုတ်ပါ။ မြန်မာ့နည်း မြန်မာ့ဟန်၊ လုပ်သမျှတင့်တယ် ၊ အာဏာရှင်ပုံစံ၊စာဖတ်ပရိသတ် ပြည်သူကို ဂရုမစိုက်မှုသာဖြစ်ပါတယ်။
Eleven FB Page မှာ တင်ပြိး ပြန်မဖျက်မှီက
ဒါကြောင့် အသေအချာရှုမှတ်စိစစ်လိုက်တဲ့အခါ အဲဒီဆောင်းပါးပါအချက်အလက်တွေအရရော၊ မြန်မာပြည်က နာမည်ကြီး ဂျာနယ်နှစ်စောင်ရဲ့ ချိန်သားကိုက်လှုပ်ရှားမှုတွေအရပါ ထွက်ပေါ်လာတဲ့ အဖြေကတော့ asiasentinel မှာ 30 Oct 2012 နေ့စွဲနဲ့ ဖော်ပြခဲ့တဲ့ ရခိုင်ပဋိပက္ခ နောက်ကွယ်မှ အမျိုးသားရေး အစွန်းရောက် မီဒီယာ ဆောင်းပါးထဲကအတိုင်း ရခိုင်အရေးမှာ နောက်ကွယ်သွေးထိုးနေသူတွေက မီဒီယာတွေကိုယ်တိုင် တသဝေမတိမ်းဖြစ်နေတာ ပိုပြီးတော့ ထင်ရှားလာခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာပြည်ရဲ့ နာမည်ကြီး ဂျာနယ်နှစ်စောင်လုံးကတော့ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းနေထိုင်ကြသူ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေက ဘယ်လိုအမှုမျိုးကို ကျူးလွန်ကြသည်ဖြစ်ပါစေ၊ စာလုံးမည်းကြီးတွေနဲ့ ဖော်ပြပြီး တခမ်းတနားသတင်းလုပ်လာ ကြတာကို သတိထားမိကြပါလိမ့်မယ်။ သည်ဗွိုက်စ်ဂျာနယ်ကတော့ မဆီမဆိုင် တမူးဘက်ကို အိန္ဒိယနိုင်ငံသား အ၀င်အထွက်များပါတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းမျိုး ဖော်ပြခဲ့သလို အလဲဗင်းကတော့ အထက်မှာဖြော်ပခဲ့တဲ့အတိုင်း ပရိုမီဒီယာလမ်းစဉ်ကနေ သွေဖယ်ပြီး ခေါင်းစဉ် (headline) ကိုတောင် မစိစစ်ပါဘဲ မြန်မာနိုင်ငံတွင်း နေထိုင်တဲ့ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေကို အခြားဘာသာဝင်တွေက ယုံထင်ကြောင်ထင်ဖြစ်လာအောင် အချိန်ကောင်းမှာ သွေးထိုးလှုံဆော်ခဲ့ပါတယ်။
ရခိုင်အရေးနောက်ကွယ်က ကြိုးကိုင်သူတွေဟာ ဘယ်သူတွေလဲ? အလဲဗင်းကတော့ မြန်မာပြည်တွင်းက အစ္စလာမ်မစ် အစွန်းရောက်တွေပါပဲလို့ မြန်မာပြည်က နာမည်ကြီး Racist အန္တီအစ္စလာမ် တက်ကြွလှုပ်ရှားသူ ရဟန်း ဦးဝီရသူရဲ့ခြေလှမ်းတွေအတိုင်း လေဖမ်းဒန်းစီးပြီး ဒါကတော့ ကျွန်တော်တို့ အာဘော်ပါပဲလို့ ခေါင်းစဉ်တပ်ကာ ပရိသတ်ကို ချပြခဲ့ပါပြီ။
ဒါ့ပြင် သည်ဗွိုက်စ်ဂျာနယ်ရဲ့ အယ်ဒီတာချုပ် ဦးကျော်မင်းဆွေကလည်း အလားတူသဘောသက်ရောက်တဲ့ ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကို ၂-၇-၂၀၁၂ ရက်စွဲနဲ့ သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်စာမျက်နှာမှာ ရေးသားခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့အဲဒီ ပုဂ္ဂလိကအာဘော်ကို ပထမဦးဆုံး Like လုပ်သွားကြသူတွေထဲမှာတော့ နာမည်ကြီး မှူးဇော်ပါဝင်နေပါတယ်။
တိုက်ဆိုင်တယ်လို့ပဲ ပြောရမလား၊ (နိုဝင်ဘာ ၈ ၊ ၂၀၁၂) ရက်နေ့မှာ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ် ကို စစ်မြေပြင်လို သဘောထားနေတဲ့ မှူးဇော်နဲ့ သာမာန်ဖေ့စ်ဘွတ်သုံးစွဲသူ ကေတီဇက်အို ဆိုသူတို့ ကို ဘီဘီစီက ဆက်သွယ်မေးမြန်းတဲ့အခါ ကေတီဇက်အိုရဲ့ "ရခိုင်မှာ ရိုဟင်ဂျာတွေဆီက လက်နက်တွေသိမ်းမိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း၊ မြန်မာ့တပ်မတော်က ထိုးစစ်ဆင်နေ ပြီဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကို မှူးဇော်က ဖေ့ဘွတ်ကနေ သတင်းမှားဖြန့်ချိခဲ့တယ်၊ အဲဒီအတွက်ဘယ်လိုတာဝန်ယူမလဲ" ဆိုတဲ့အမေးကို မှူးဇော်က ဝေ့လည်ကြောင်ပတ်လုပ်သွားတာ နားဆင်ခဲ့ရပြန်ပါတယ်။
အလဲဗင်းမီဒီယာနဲ့ သည်ဗွိုက်စ်တို့ခင်ဗျား၊ နောင်ကြီးတို့ ခုလို ချိန်သားကိုက် လက်ချင်းရိုက်ဆောင်ရွက်နေကြတာတွေ၊ အကွက်ချပြီး မြန်မာပြည်တွင်းမှာ အစွန်းရောက် အစ္စလာမ်မစ်တွေ ရှိနေသယောင်ဝါဒဖြန့်ပြီးတော့ ရခိုင်အရေးမှာ အဲဒီအစွန်းရောက်တွေကပဲ ကြိုးကိုင်သယောင်လုပ်ဆောင်ကြခြင်းတွေဟာ ဘယ်လောက်ထိ တာသွားနေခဲ့ပြီလဲဆိုတာ ဆန်းစစ်ကြည့်ကြပါ။ နောင်ကြီးတို့ပြည်တွင်း မှာတော့ အောင်မြင်ကောင်း အောင်မြင်နေနိုင်ပေမယ့် နိုင်ငံတကာမှာ တော့ နောင်ကြီးတို့ အထောက်အထားဗလာနဲ့ ပြောသမျှဆိုသမျှဟာ "မာန်တရှေးရှေး တရေးရေးနှင့် နွားချေးထက်ဝယ် ဖားသငယ်" ဆိုသလို အုန်းအင် အုန်းအင်နဲ့ မြုပ်ကာ မြုပ်ကာ အသံတိမ်နေရှာပါပြီ။
အခု အလဲဗင်းမီဒီယာက သိက္ခာမဲ့လှတဲ့ လုပ်ရပ်တစ်ခုကို ထပ်မံလုပ်ခဲ့ပါပြီ။ ဆောင်းပါး ခေါင်းစဉ်တောင် အသေအချာမစိစစ်ပဲ ပက်ဘလိစိုက်လုပ် ခဲ့သလို အင်္ဂလိပ်မူက ခေါင်းစဉ်တမျိုး၊ မြန်မာမူက ခေါင်းစဉ်တမျိုးနဲ့ လည်သလို လုပ်စားပြီး ပရိသတ်ကို မျက်လှည့်ပြထားပါတော့တယ်။
ဒါ့ကြောင့် ရခိုင်ပဋိပက္ခ နောက်ကွယ်မှ အမျိုးသားရေး အစွန်းရောက် မီဒီယာ ဆောင်းပါးမှာ ဖော်ပြထားတဲ့ "ဒီလိုမျိုး ကိုယ့်သေတွင်းကိုယ်တူးတဲ့ နည်းလမ်းရဲ့ နိုင်ငံရေးအကျိုး သက်ရောက်မှုကတော့ အန္တီမွတ်စလင်မ် လှုပ်ရှားမှုကြီးပါပဲ။ (တနည်းပြောရရင် သူတို့ဟာ ကိုယ့်သေတွင်းကိုယ်တူးပြီး နိုင်ငံရေးအရ အကျိုးအမြတ်ရှိလှတဲ့ အန္တီမွတ်စလင်မ်လှုပ်ရှားမှုကြီးကို ဖန်တီးနေတာပါ။) ဒါပေမယ့် အန္တီမွတ်စလင်မ် လှုပ်ရှားမှုကြီးကတော့ ကျယ်ပြောစွာပြန့်နှံ့ပြီးဖြစ်နေပါပြီ။" ဆိုတဲ့အချက်က သွေးထွက်အောင် မှန်ကန်နေပါတော့တယ်။
ဒါ့ပြင် ယင်းဆောင်းပါးပါ ဖော်ပြချက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ".. ရခိုင်ပဋိပက္ခကို အဆုံးသတ်ဖို့ ပထမခြေလှမ်းက ဒီမြန်မာဘာသာနဲ့ထုတ်ဝေတဲ့ ဂျာနယ်တွေကို ခဏဖြစ်ဖြစ် ရပ်ဆိုင်းဖို့ပါပဲ။ သူတို့တွေက လူထုရဲ့အထင်အမြင်ကို အုံကြွယဉ်ကျေးမှုအဖြစ် ပြောင်းလဲနေတာပါ။ ဒါမှမဟုတ်ရင်တော့ လူတွေက သူတို့ကြောင့် ဆက်ပြီး အရူးဖြစ်နေကြပါလိမ့်မယ်။ ဒီလိုနဲ့ပဋိပက္ခကို အားကိုးအားထားပြုစရာအဖြစ် ဆက်လက် ဆွဲကိုင်ထားကြပါလိမ့်မယ်။ " ဆိုတာကလည်း အလေးအနက် သုံးသပ်ကြရမယ့် အကြံပြုချက် ဖြစ်လာပါတော့တယ်။
ရခိုင်အရေးက နောက်ပြန်လှည့်သွားစေနိုင်သလား ဆီကို ပြန်ပြီးတော့ ဦးလှည့်ကြည့်ကြပါမယ်။ အဆင့်မရှိသေးတဲ့ အယ်ဒီတာပေါက်စအာဘော်ကို အလဲဗင်းက သူတို့အာဘော်လည်း ဒါပါပဲလို့ ဆိုလိုက်တော့ ငိုအားထက် ရယ်အားက သန်ရမလိုလို။
၁) အဲဒီဆောင်းပါးမှာ ရခိုင်အရေးကို ပြည်တွင်းကိစ္စ (internal issue) လို့ ဖြော်ပထားပေမယ့် အာရပ်နွေဦး တော်လှန်ရေးအကြောင်းတွေ၊ ယူကေအခြေဆိုက်ဂါးဒီးယန်းက အောက်တိုဘာ ၇ မှာ နှစ် ၄၀ ကြာ internal conflict အဖြစ် ခေါင်းစဉ်တပ်ဖော်ပြခဲ့တဲ့ဖိလစ်ပိုင်ကိစ္စ၊ ပါလစ္စတိုင်းကိစ္စတွေ ဆွဲထည့်ပြီး ဒါ့ကြောင့် ကျုပ်တို့ပြည်ကြီးမှာလည်း ဒါမျိုးဖြစ်နိုင်လို့ သုံးသပ်ထားပါတယ်။ တစ်တီတူး ခြေထောက်မိုးပေါ်ထောင်အိပ်သလို မယောင်ရာဆီလူးပြီးအများ ပြည်သူတွေ သူတို့ကိုယ်သူတို့ လုံခြုံမှု မရှိတော့ပါလားလို့ ခံစားလာရအောင် ခြောက်လှန့်ထားတဲ့ ပရိုပါဂန်ဒါဖြစ်ပါတယ်။
၂) မှူးဇော်က ၀ီကီလိခ်သတင်းတစ်ရပ်ကို ဖေ့စ်ဘွတ်မှာ တင်ပြီး ရိုဟင်ဂျာတွေနဲ့ အကြမ်းဖက်တွေ အဆက်အသွယ်ရှိပါတယ်လို့ သက်သေပြုဖူးပါတယ်။ အဲဒိအချက်က လွဲရင် မြန်မာပြည်က တာဝန်ရှိတဲ့သူ ဘယ်သူကမှက ယနေ့ထိ တရားဝင် ရိုဟင်ဂျာတွေသည် အကြမ်းဖက်နဲ့ အဆက်အသွယ်ရှိပါတယ်လို့ အတည်ပြုပြောကြားခြင်းမျိုးမရှိသေးပါ။
၃) ဒီလိုအခြေအနေတွေကြောင့် မြန်မာမီဒီယာတွေဟာ ကလိမ်စေ့ငြမ်းစင်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ လုံခြုံရေးတာဝန်ရှိသူများရဲ့ နေရာကို ၀င်ယူကာ ရိုဟင်ဂျာပြဿနာနောက်ကွယ်မှာ အစ္စလာမ်မစ် အစွန်းရောက်ရှိတယ်လို့ သက်သေအထောက် အထား အတိအကျမပြနိုင်ဘဲ ပလန်ချကာ စနစ်တကျ လိုသလို အကွက်ရွှေ့ဖို့ ကျိုးစားနေကြတာ ဆင်ပြောင်ကြီးပေါ် အလံစိုက်သလို ထင်ရှားလှပါတယ်။
အချက် နံပါတ် (က) – ယခု နောက်တစ်ကြိမ်မှာ ဘာဖြစ်လို့ ဘင်္ဂါလီ လူနည်းစု နေရာတွေမှာ ဘင်္ဂါလီတွေဖက်က စခဲ့သလဲဆိုတာ စဉ်းစား စရာပါ။ သူတို့ကို ရခိုင်တွေကနေ နှိပ်စက်နေတယ်လို့ ရှုမြင်စေချင်လို့လား။ ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာ ရခိုင် တိုင်းရင်းသားတွေ အနေနဲ့လည်း ဒေါသတွေကို ထိန်းဖို့လိုပါတယ်။ ရိုဟင်ဂျာဆိုတာ ပေါ်လာတာ မကြာသေးပါဘူး။ အခုတော့ အဲဒီ့ လူမျိုးစုကို အကြောင်းပြပြီး တောင်းဆိုနေတာဟာ ဖိလစ်ပိုင်မှာ အစွန်းရောက်တွေရဲ့ အုပ်ချုပ်မှု တောင်းဆိုပုံနဲ့ ဆင်တူနေပါတယ်။ လုံးဝ လက်မခံနိုင်ပါဘူး။
အချက်နံပါတ် (ခ) ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာ မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာ နေလာတဲ့ သူတွေကိုလည်း မြန်မာစာပေ ကျွမ်းကျင်မှုရှိရင် ဧည့်နိုင်ငံသားအဖြစ် အသိအမှတ် ပြုနိုင်ပါတယ်။ လူမျိုးစုတွေဟာ အတူတကွ ယှဉ်တွဲနေထိုင်လို့ရပါတယ်။ အရင်လည်း နေခဲ့ကြဖူးပါတယ်။ ဒါကို ဘယ်သူတွေ ဖျက်ခဲ့ကြတာလဲ။
အချက်နံပါတ် က နဲ့ ခ ကတော့ အလဲဗင်းရဲ့ ဆောင်းပါးပါ ဖော်ပြထားလျက်အချို့ပါ။ ညီငယ် ၁၈ နှစ်သားလေး ဇေယျနန္ဒခင်ဗျား၊ ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာကို မကြာသေးတဲ့ကာလလို့ ခေါ်ပါသလား။ ဒီအချက်က ရိုဟင်ဂျာတွေကို ရည်ညွှန်းတာမဟုတ်ဘူးလို့ ချေပချင်ရင် ရိုဟင်ဂျာ ပြဿနာအကြောင်း ရေးနေတဲ့ဆောင်းပါးမှာ အဲဒီအချက် ထည့်စရာလည်း လိုမယ်မထင်ပါ။
ရိုဟင်ဂျာတွေ တောင်းဆိုပုံက ဖိလစ်ပိုင်အစွန်းရောက်တွေ အုပ်ချုပ်မှုတောင်းဆိုပုံနဲ့ ဆင်တူနေပါတယ်လို့ ဖော်ပြထားပေမယ့် ဖိလစ်ပိုင်မှာတော့ ဘယ်လိုတောင်းဆိုတယ်၊ ရိုဟင်ဂျာကတော့ ဘယ်လို တောင်းဆိုသလဲ ဆိုတာမျိုး အကျဉ်းတောင် ရေးမပြထားပါဘူး။ ညီငယ် ၁၈ နှစ်သားလေး ဇေယျနန္ဒနဲ့ အလဲဗင်းဝါရင့် အယ်ဒီတာရှော်ကြီးများ သတိမထားမိခဲ့တာကတော့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လက်ရှိဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ တရားဝင် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒေသတွေက လူမျိုးစုတွေဟာ တိုင်းရင်းသားစစ်စစ်တွေဖြစ်ကြပါသလား၊ သူတို့တွေ အားလုံး မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးကျိုးပမ်း မှုသမိုင်းဖြစ်ဖြစ်၊ နိုင်ငံတည်ဆောက်ရေးအပိုင်းမှာဖြစ်ဖြစ် အတိုင်းအတာ တစ်ခုအထိ ပါဝင်ခဲ့ကြဖူးပါသလား။
(စ) ရှမ်းပြည်နယ်ရှိ ဟိုပန်မြို့နယ်၊ မိုင်းမောမြို့နယ်၊ ပန်ဝိုင်မြို့နယ်၊ နားဖန်းမြို့နယ်၊ မက်မန်းမြို့နယ်နှင့် ပန်ဆန်း (ပန်းခမ်း) မြို့နယ် ခြောက်မြို့နယ် တို့ကို ခရိုင်နှစ်ခရိုင် ဖွဲ့ပြီး ""၀"" ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ တိုင်း။
ဖိလစ်ပိုင်မှာ Moro Islamic Liberation Front (MILF)နဲ့ အဲဒီကနေ ခွဲထွက်တဲ့ အဘူဆိုင်ရဖ်ခေါင်းဆောင်တဲ့ အစွန်းရောက်အုပ်စု က အကြမ်းဖက်လုပ်ရပ်တွေကို ကျူးလွန်ခဲ့ကြဖူးတယ်။ သူတို့ရဲ့ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတွင်း ပြည်တွင်းသူပုန်ထမှုဟာ နှစ်ပေါင်း ၄၀ကျော် ၅၀ နီးပါးရှိနေခဲ့ပြီ။
အဲဒီလက်နက်ကိုင်သူပုန်တွေရဲ့ Autunomous အုပ်ချုပ်ရေး လိုလားပုံမျိုးက ရိုဟင်ဂျာတွေထက် မြန်မာပြည် အခြေခံဥပဒေပါ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ဒေသတွေနဲ့ သာ ပိုပြီးတော့ ဆင်တူနေပါတယ်။
အောက်တိုဘာ ၁၅ မှာ ဖိလစ်ပိုင်အစိုးရနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး၊ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးစတာတွေ သဘောတူခဲ့တဲ့ MILF ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသမှာ Manila retaining control over defence၊ မနီလာအစိုးရက ကာကွယ်ရေးကို တာဝန်ယူထားတယ်ဆိုတဲ့ သဘောတူညီချက်ကြီး ပါဝင်နေတာ သတိထားရမယ့်အချက်ပါ။ ဒါကိုမှ ပုံကြီးချဲ့ပြီး နိုင်ငံတစ်ခုပဲ ခွဲထွက်သွား သယောင်မျိုး သုံးသပ်တဲ့ အလဲဗင်းကတော့ ပုံကြီးချဲ့ပြီး မီးလောင်ရောင် လေပင့်ထားတာမျိုးပါ။
အချက် နံပါတ် (ဂ) ဒါ့အပြင် အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့ ရပ်တည်ချက်ကိုလည်း သံသယ ဝင်စရာ ရှိပါတယ်။ သူတို့နဲ့ အစွန်းရောက် မူဆလင်တွေ ကြားမှာ ရှိနေတဲ့ ပြဿနာတွေကို အရှေ့တိုင်းဖက် အာရုံ လွှဲတာ မဟုတ်ဘူးလို့ ပြောနိုင်သလား။ အဲဒီ့လိုမျိုး စိတ်ကူးတွေ ရှိနေရင် ဘယ်လို လုပ်မလဲ။
ဒါမျိုးက သံသယပဲ၊ လေဖမ်းဒန်းစီး လက်ဖက်ရည်ဆိုင်က အာဘော် opinion အဆင့်ဖြစ်နေပါတယ်။ နိုင်ငံတကာ တန်းမ၀င်ပါ။ ကျွန်တော်တို့တော့ ဒါမျိုး ထင်တာပဲ လို့ သက်သေဗလာနဲ့ ပြောရင်တော့ ထောင်နန်းတောင် အခန့်မသင့်ရင် စံသွားနိုင်ပါတယ်။ ဟိုလိုဆိုရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ၊ ဒီလိုဆိုရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာ နိုင်ငံတကာ တန်းဝင်ချင်လှပါချည့်ရဲ့ဆိုတဲ့ မီဒီယာရဲ့ အာဘော်လို့ ယူဆရတော့ မှာလားဗျာ။
အခု ကျနော် (စာရေးသူ) ရဲ့ အဲဒီအလဲဗင်းမီဒီယာဆောင်းပါးအပေါ် prime concern ကို ချပြသွားပါ့မယ်။ အထက်မှာ ပြောခဲ့သလိုပါပဲ၊ အလဲဗင်းရဲ့ ချိန်သားကိုက်ဝါဒဖြန့်မှုဟာ မူမမှန်တာက တကြောင်း၊ ပြည်တွင်းနေ မွတ်စလင်မ်တွေကို အသားလွတ် မျက်မှန်စိမ်းတပ်ပြီး ကြည့်လာနိုင်တာက တကြောင်း အဲဒီအကြောင်း လေးတွေပါပဲ။
ချိန်သားကိုက် ၀ါဒဖြန့်မှု မူမမှန်ဆိုတာ ဘာကိုဆိုလိုပါသလဲ၊ ရခိုင်အရေးအခင်း (ပ) အကြိမ်ဖြစ်တော့ နိုင်ငံတကာ သုံးသပ်ချက်က နိုင်ငံတကာ ခရီးစဉ်ထွက်ခွာဖို့ ရှိနေတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် ဘေးကျပ်နံကျပ်တွေ့အောင်၊ defame ဖြစ်အောင် နောက်ကြောင်းပြန်လိုသူ လူတစ်စုက ပြုလုပ်တာလို့ သုံးသပ်ခဲ့ကြပေမယ့် အလဲဗင်းကြီး အဲဒီလို သုံးသပ်ပြဖို့နေနေ သာသာ ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်ကို တောင် ရိုဟင်ဂျာဆန့်ကျင်ဖို့ ဖိအားပေးခဲ့ပါသေးတယ်။
၁၈ နှစ်သား အယ်ဒီတာ ပေါက်စ နဲ့ အလဲဗင်းခင်ဗျား၊ ဖော်ပြပါအချက်ကသာ လူအများကြား ပေါ်ပြူလာဖြစ်ခဲ့တဲ့ သုံးသပ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ခင်ဗျားတို့ မသိချင်ယောင် ဆောင်ပြီး ဟိုဟာ လက်ညှိုးထိုး၊ ဟိုနိုင်ငံမှာ ဒါမျိုးဖြစ်နေ၊ ဒီမှာဒါမျိုးဖြစ်နေ၊ ဒီလိုဖြစ်နေရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ စတာတွေ ပြောနေတာကတော့ beat around the bush ၊ မယောင်ရာဆီလူးနေတာ ပေါ်တင်ကြီးဖြစ်နေပါပြီ။
နောက်တချက်က ပြည်တွင်းနေ မြန်မာနိုင်ငံသား မွတ်စလင်မ်တွေကို ဘာသာခြားများ စိုးရိမ်မကင်းဖြစ်လာအောင် သွေးထိုးလှုံဆော်မှုပါ။
အချက် (ဃ) မြန်မာနိုင်ငံဟာ မဟာဗျူဟာ ကျတဲ့ နေရာ တစ်ခုမှာ တည်ရှိနေတာပါ။ မြန်မာနိုင်ငံကနေ တစ်ဆင့် အန္ဒိယ သမုဒ္ဒရာဆီကို ထွက်ပေါက်ရဖို့ တရုတ်က ကြိုးစားနေသလို တရုတ်ရဲ့ ဩဇာအာဏာကို ပြန်ထိန်းဖို့ အမေရိကန်ကနေ မြန်မာနိုင်ငံကို အလိုရှိနေပါတယ်။ ဒါတင်မကသေးပါဘူး မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ အစွန်းရောက် အစ္စလာမ်မစ် ဝါဒီတွေရဲ့ မျက်စိကျခြင်းကို ခံနေရတယ်လို့ ယူဆပါတယ်။
အချက် (င) အာရပ် နွေဦးတော်လှန်ရေး ဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာ မူဆလင် အစွန်းရောက်တွေ အနေနဲ့ သူတို့ရဲ့ ဦးတည်ချက်ကို အမေရိကန်ဆီ တိုက်ရိုက် ပစ်မှတ်ထားရာကနေ အမေရိကန်ရဲ့ အကျိုးစီးပွား ရှိတဲ့ နေရာတွေကို ပြောင်းလဲလာခဲ့ပါတယ်။
အချက် (စ) (အရှေ့အလယ်ပိုင်း နိုင်ငံတွေမှာဆိုရင် သူတို့ရဲ့ တခြား ပြဿနာတွေကို ဆွေးနွေးရမှာ စိုးလို့ အမြဲတမ်း အစ္စရေး ပါလက်စတိုင်း ပြဿနာကိုပဲ ရှေ့တန်းတင်ခဲ့တဲ့ သာဓကတွေရှိပါတယ်။) အာဆီယံအနေနဲ့ အဓိကပြဿနာတွေကို ဆွေးနွေးတိုင်ပင်မှု မပြုပဲ ရခိုင်အရေးကို နိုင်ငံတကာ အရေးကိစ္စတစ်ခုလို သဘောထားလို့ မဖြစ်ပါဘူး။ ပြီးတော့ အခုပဋိပက္ခတွေ ဖြစ်ပွားတဲ့ ကျောက်ဖြူဒေသဟာ ရေနံနဲ့ သဘာဝဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်း စီမံကိန်းရဲ့ အဓိကနေရာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစီမံကိန်းကိုလည်း ၂၀၁၃ မှာ လည်ပတ်နိုင်အောင် လုပ်ဆောင်နေချိန်မှာ ချိန်ကိုက်ပြီး ပဋိပက္ခတွေ ဖန်တီးခဲ့သလားဆိုတာလည်း စဉ်းစားစရာပါပဲ။
အချက် ဃ ပါ မြန်မာနိုင်ငံသည် အစ္စလာမ်မစ် အစွန်းရောက်တွေရဲ့ မျက်စိကျခြင်းခံနေရပါတယ်လို့ ပြောရလောက်အောင် ရိုဟင်ဂျာတွေက ၀ တွေ၊ ကိုးကန့်တွေလို မြို့တော်ရန်ကုန်ထိ တက်ပြီး သေနတ် တကားကား လုပ်ဖို့ နေနေ ရပ်ကွက်တခုနဲ့ တစ်ခုသွားဖို့ ဗီဇာယူနေရတဲ့ အနေအထားပါ။ ဝတွေ ကိုးကန့်တွေလို လုပ်ချင်တာ လုပ်လို့ရတဲ့ အနေအထားရှိခဲ့ရင် ရိုဟင်ဂျာကို တည်ပြီး အစ္စလာမ်မစ်အ စွန်းရောက်တွေက မြန်မာပြည်ကို ၀င်ဖို့ ကြိုးစားနေကြတာက ယုတ္တိရှိပါလိမ့်မယ်။
ရိုဟင်ဂျာသည် ရခိုင်များကို ဒုက္ခပေးတယ်၊ ရခိုင်တွေကို အကြမ်းဖက်တယ်ဆိုတာသေချာရင် နိုင်ငံတကာမီဒီယာတွေ၊ သတင်းဌာနတွေနဲ့ ကုလအေဂျင်စီတွေကို မယောင်ရာ ဆီလူးမနေဘဲ ခင်ဗျားတို့ ယူဆတဲ့ သတင်းမှန်တွေ လွှမ်းမိုးအောင် လုပ်ကြပါရော့လားဗျာ။
မြန်မာပြည်ကို အမေရိကန်ဝင်မှာမို့ အမေရိကန်အကျိုးစီးပွားပျက်စီးအောင် ဖျက်လို့ဖျက်ဆီးလုပ်ဖို့ အစ္စလာမ်မစ်အစွန်းရောက်က မြန်မာကို မျက်စိကျဆိုတာက တယ်လည်းတတ်နိုင် ရယ်စရာကောင်း လှတဲ့ အကွက် ဆင်လိမ်လည်မှုကြီးပါလားဗျာ။
စစ်အုပ်ချုပ်ရေးလက်ထက်တုန်းကတည်းက ပစ်မှတ်ဖြစ်နေတဲ့ ပြည်တွင်းနေ မွတ်စလင်မ်တွေ ဘာလုပ်နေသလဲ၊ ဘာတွေ ဟောပြောတင်ပြဖြန့်ချိနေ သလဲဆိုတာ ခင်ဗျားတို့ အားကိုးတဲ့ မြန်မာ့တပ်မတော်က အရာရှိကြီးတွေ ခရေစေ့တွင်းကျ မသိဘူးဆိုတာ ဖြစ်နိုင်ပါ့မလား။ ခင်ဗျားတို့ အစွန်းရောက် အစ္စလာမ်မစ်တွေ ၀င်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းအဖြစ် စွပ်စွဲနေတဲ့ ဘင်္ဂါလားဒေ့ရ်ှဘက်က တာဝန်ရှိသူတွေကတော့ သူတို့နိုင်ငံတွင်း ဖျက်ဆီးခံရတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာ သာသနိက အဆောက်အဦတွေကို ပြန်လည်ဆောက်လုပ်ပေးမယ်လို့ ကြေငြာထားပေမယ့် အစွန်း မရောက်ကြောင်း ငယ်သံပါ အောင် အော်ဟစ်နေတဲ့ မြန်မာပြည်မှာတော့ ဗလီတွေ ဖြိုချဖျက်ဆီးခံရသလို ၊ အကြောင်းမဲ့ချိတ်ပိတ်ထားတာတွေကလည်း နှစ်ပေါင်းများစွာ ကြာနေခဲ့ပါပြီ။
၁၈ နှစ်သား အယ်ဒီတာလေးနဲ့ အလဲဗင်းဝါရင့်ဆရာကြီးများခင်ဗျား၊ အမေရိကန်အကျိုးစီးပွားကို တိုက်ရိုက်ထိခိုက်အောင် လုပ်ဖို့ဆိုတာက အမေရိကန်ပြည်တွင်းမှာသာ ပိုပြီးထိရောက်မယ်ဆိုတဲ့ အချက် မှာ ဆရာကြီးတို့လည်း သဘောညီမျှလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
ဒီတော့ကား၊ အခုအမေရိကန်ပြည်တွင်းမှာ အစ္စလာမ်မစ် အစွန်းရောက်တွေ ကျူးလွန်တဲ့ အကြမ်းဖက်မှုကို အမေရိကန်ဘက်က တတ်သိနားလည်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေကိုယ်တိုင် ဘယ်လို ပြောခဲ့၊ ပြောနေကြပါသလဲ။
ဖေဖော်ဝါရီ ၉ ၊ ၂၀၁၂ နေ့စွဲနဲ့ ဖော်ပြခဲ့တဲ့ Report calls Muslim terrorisma'minuscule threat' ခေါင်းစဉ်ပါ ၀ါရှင်တန်ပို့စ်သတင်းမှာတော့ အစီရင်ခံစာတစ်ရပ်အရ သိရှိရသည်မှာတဲ့၊ အစ္စလာမ်မစ် အကြမ်းဖက်မှုသည် "tiny" ဆိုတဲ့ အနည်းအကျဥ်းကလေးပါပဲ၊ တခါတလေကျတော့ အစိုးရ အရာရှိကြီးတွေက ပုံကြီးချဲ့ကြတာမျိုးတော့ ရှိတာပေါ့ဗျာလို့ အကြမ်းဖက်ဆန့်ကျင်ရေး တာဝန်ရှိသူ ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးက ဖော်ဖော်ဝါရီ ၈ နေ့စွဲနဲ့ ထုတ်ဝေတဲ့ အစီရင်ခံစာမှာ ဖော်ပြထားပါသတဲ့။ (http://www.washingtonpost.com/national/on-faith/report-calls-muslim-terrorism-a-minuscule-threat/2012/02/08/gIQA9yWbzQ_story.html)
အလဲဗင်းဆရာကြီးတွေ ကျေလည်ကြမှာမဟုတ်လို့ ယူဆတာကြောင့် အခု ဥရောပဇုန် အကြမ်းဖက်မှု စာရင်းဇယား တွေ လျန်လှောကြည့်ကြရအောင်ဗျာ။
Europol ခေါ် ဥရောပ ပုလိပ်အဖွဲ့အစည်းရဲ့ ၂၀၁၀ အစီရင်ခံစာမှာ ဖော်ပြထားတာက ဥရောပဇုန်အတွင်း အကြမ်းဖက်မှုပေါင်း ၂၄၉ ခုဖြစ်ခဲ့ရာမှာ အစ္စလာမ်မစ်အစွန်းရောက်ကြောင့် အမှုပေါင်း ၃ ခုသာ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၀ လည်းမဟုတ် ၁၀၀ လည်းမဟုတ် ၁၀ ခုလည်းမဟုတ်ပါ။ (https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/publications/tesat2010_0.pdf)
အထက်မှာ ပူးတွဲပေးထားတဲ့ ပီဒီအက်ဖ်အစီရင်ခံစာအရဆိုရင် ၂၀၀၇ ကနေ ၂၀၀၉ အတွင်း အကြမ်းဖက်မှုပေါင်း ၁၃၁၇ ခုဖြစ်ခဲ့တယ် ၊အဲဒီထဲက ၃ ခုကိုသာ မွတ်စလင်မ်တွေ ကျူးလွန်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ သိရတယ်၊ ရာခိုင်နှုန်းအရဆိုရင်တော့ ၀.၂ ပဲရှိတာကြောင့် အဲဒီ ၂၀၀၇ ကနေ ၂၀၀၉ မှာလည်း အစ္စလာမ်မစ်အကြမ်းဖက်မှုက ၁ ရာနှုန်းတောင် မရှိခဲ့ပါ။
ဒီတော့ အလဲဗင်းဆရာကြီးများ ပြောသလို အမေရိကန်အကျိုးစီးပွားကို ဖျက်ဆီးဖို့ အစ္စလာမ်မစ်အစွန်းရောက်တွေ အမေရိကန်ပြည်တွင်းမဟုတ်ဘဲ မိုင်ပေါင်းများစွာဝေးသီလှတဲ့ နိုင်ငံခြားလည်းဖြစ်၊ အမေရိကန် ကုမ္ပဏီ တစ်ခုတောင်မခြေမတည်နိုင်သေး၊ အမေရိကန်ပြည်ထွက် လူသုံးကုန်ပစ္စည်း မူးလို့ ရှူစရာတစ်ခုစ နှစ်ခုစပဲရှိနေသေး တဲ့ မြန်မာပြည်ကို မျက်စိကျနေပါတယ်ဆိုတာကတော့ အော်ဂလီဆန်စရာကောင်းလှတဲ့ အရူးကွက်နင်း အက္ခရာ စဉ်တွေပါပဲ။
ကောက်ချက် ချစရာက အနောက်နိုင်ငံတွေမှာ ခေတ်စားပြီး ခု ၂၀၁၂ ကန်ရွေးကောက်ပွဲမှာတောင် မစ်ရူမ်နေးနဲ့ အပေါင်းအပါတွေ ကို ပေါ်ပြူလာဖြစ်အောင် ထိုးတင်ပေးတဲ့ အစ္စလာမ်မိုဖိုးဘစ် (အစ္စလာ မ် ကြောက်ရောဂါ) ဘန်းပြပြီး မဲဆွယ်တာကို အတုခိုးပြီး အလဲဗင်းနဲ့ မြန်မာမီဒီယာရှော်ကြီးတွေပါ လှုပ်ရှားကြဖို့ နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုခုက ကြိုးကိုင်လှုပ်ရှားခိုင်းနေတာ ဖြစ်နိုင် မဖြစ်နိုင်ဆိုတာလည်း စဉ်းစားစရာပါ။
အလဲဗင်းဂိုဏ်းချုပ်က သူ့ရဲ့ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်မှာ ရခိုင်အရေးနဲ့ စပ်လျဉ်းပြီး အစ္စရေးလို ကျင့်သုံးသင့်ရင် ကျင့်သုံးရမယ်လို့ ၀ါဒဖြန့်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ အခုတစ်ခါ ကမ္ဘာ့ကုလသမ္မဂရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက် ကို ပြောင်ပြောင်တင်းတင်းချိုးဖောက်ထားတဲ့ အစ္စရေးသံယောင်လိုက်ပြီး "အရှေ့အလယ် ပိုင်း နိုင်ငံတွေမှာဆိုရင် သူတို့ရဲ့ တခြား ပြဿနာတွေကို ဆွေးနွေးရမှာ စိုးလို့ အမြဲတမ်း အစ္စရေး ပါလက်စတိုင်း ပြဿနာကိုပဲ ရှေ့တန်းတင်ခဲ့တဲ့ သာဓကတွေရှိပါတယ်။" အဲဒီလို ရေးသားထားတာကို တွေ့ရပါတယ်။
အလဲဗင်းရဲ့ ဆရာကြီးတွေနဲ့ ၁၈ နှစ်သားကိုယ်တော်ချောလေးတို့ နယ်မြေပေးရမှာကြောင့် အာခေါင်ခြစ်အော်၊ နည်းမျိုးစုံသုံးပြီး ကန့်ကွက်နေတဲ့ကြားက ကုလဆုံးဖြတ်ချက်ကို ချိုးဖောက်ပြီး နယ်မြေကျူး ကျော်ခံထားရသူတွေကို ကိုယ်ချင်းမစာနာနိုင်ဖြစ်နေတာက ဘာကြောင့်ပါလဲ။ ရှင်းပါတယ်၊ နိုင်ငံရေးအကျိုးအမြတ်များလှတဲ့ အစ္စလာမ်မိုဖိုးဘစ် နည်းဗျူဟာကြောင့်ပါ။ ဒါမှမဟုတ်ရင်တော့ မြန်မာပြည်မှာ နယ်မြေလုမယ့် ရိုဟင်ဂျာမရှိတာကြောင့် ကိုယ်ချင်းစာနာမပေးနိုင်တာလဲ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အဲဒီနှစ်ချက်လုံးမမှန်ဘူးဆိုရင်တော့ အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာ အစ္စရေး ပါလစ္စတိုင်း ကိစ္စချည့် ရှေ့တန်းတင်နေတယ်ဆိုတာမျိုး ပြောထွက်မှာ မဟုတ်ပါ။ ပြည်တွင်းရေး ပြည်တွင်းရေးနဲ့ ဝေဖန်လာလိုက်တာ ကမ္ဘာကြီးတောင် တပတ် ပတ်မိတော့မလို ဖြစ်သွားတဲ့ မနူးမနပ် ပထမနှစ်ကျောင်းသား ကလေးတော့ အလဲဗင်းဆရာကြီးတွေရဲ့ တည်ကြက်ဟုတ်မဟုတ် ဆိုတာလဲ ဘယ်သူမှ မပြောနိုင်ပါဘူး။
မသမာမှုတွေ ရှိနေတယ်လို့ သံသယ၀င်စရာ အချက်အလက်လေးတွေကတော့ ဆီယိုပေါက်လို ရှာစရာမလိုဘဲ အလိုအလျောက်ထွက်ကျလာတာမျိုးပါ။
ကျောက်ဖြူ ရွှေပိုက်လိုင်းကြီးကြောင့် ဟိုဟာတွေဖြစ်နေရပါပြီ၊ ဒါတွေလည်း ဖြစ်သွား ပါပြီလို့ ဆန္ဒဖော်ထုတ်နေကြ တာတွေ ကြက်ပျောက် ငှက်ပျောက် ပျောက်ကုန်ပြီး ရခိုင်ပြဿနာ ကသာ ကျောက်ဖြူပိုက်လိုင်းကြီး ပျက်ဆီးဖို့ လှုပ်ရှားတဲ့ အချိန်ကိုက် ဗုံးကြီး ဖြစ်နေပါရော့လား။
အလဲဗင်းရဲ့ တည်ကြက်ကလေး ၁၈ နှစ်အယ်ဒီတာ သိအောင်လုပ်ထားဖို့ နောက်ထပ်အချက်ကလေး တစ်ချက်ကို စေတနာရှေ့ထား ပညာပေးသွားပါဦးမယ်။ ၁၈ နှစ်အရွယ် နဲ့ မြန်မာပြည်က ကျောင်းသားလေးတွေ သိတာက ထိုင်းတို့ ဖိလစ်ပိုင်တို့က ခွဲထွက်ရေးမျိုး၊ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးတောင်းဆိုမှုလေးတွေတင်ပါ။ ဒါလေးတွေ ဥပမာပြနိုင်၊ ပြောနိုင်ဆိုနိုင်ရင် ဆရာကြီး ကိုဖြစ်လို့နေတာပေါ့။ အဲဒါကြောင့်လည်း အလဲဗင်းရဲ့ ၁၈ နှစ်သား အယ်ဒီတာက အစ္စလာမ်မစ် ခွဲထွက်ရေးကိုချည့် ဥပမာ ပေးပြီး ပြည်သူကို ခြောက်လှန့်သွားတာမျိုးပါ။ တနည်း၊ မြန်မာပြည် တွင်းက နှစ်ရာပေါင်းများစွာ ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းနေလာတဲ့ မွတ်စလင်မ်တွေကို သို့လောသို့လောအဆင့်မျိုး တွန်းပို့လိုက်တာမျိုးပါ။
ယူကေ ခွဲထွက်ရေး လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ RIRA ရဲ့ Omagh bombing က ၂၀၀၁ စက်တင်ဘာ ၁၁ မတိုင်ခင် ၁၉၉၈ မှာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အကြမ်းဖက်စာရင်းဝင် အကြီးစားတိုက်ခိုက်မှုကြီးဖြစ်ပါတယ်။
ယူကေနိုင်ငံ၊ RIRA ခွဲထွက်ရေး သူပုန်များ
တခါ စပိန် မြောက်ဘက်က Basque Country လို့ခေါ်တဲ့နေရာမှာ စပိန်အစိုးရနဲ့ အီးယူတို့က အကြမ်းဖက်လို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ ETA ခွဲထွက်ရေး လက်နက်ကိုင်တွေ ရှိကြပါတယ်။ သူတို့က ၂၀၁၁ အောက်တိုဘာကမှ လက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ်ကို အပြီးအပိုင် စွန့်ခဲ့ကြတာပါ။ http://campacc.org.uk/uploads/basque.pdf အရဆိုရင် စပိန်ရဲ့ war on terror က ၂၀၀၁ မတိုင်မီ ကာလအကြာကြီးကတည်းက ရှိနေပြီးဖြစ်သလို သူတို့သတ်မှတ်တဲ့ terror က အီးတီအေနဲ့ Batasuna အဖွဲ့ ပါပဲ။
စပိန်အခြေစိုက် အီးတီအေ သူပုန်များ
ဒီလို ဒီလို (အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များမဟုတ်တဲ့) ဥပမာပေးစရာ အများသားကြီးရှိနေပေမယ့်လည်း၊ အလဲဗင်းဆရာ ကြီးတွေ ဥပမာပေးတိုင်း အစ္စလာမ်သာသနာဝင်တွေကို ထိခိုက်စေမယ့် နည်းလမ်းများအထဲကသာ ရွေးချယ်နေတာ ကလည်း နောက်ကွယ်ကြိုး ကိုင် သွေးထိုးလှုံဆော်ပေးမှုအတွက် ရွေးချယ်ခံထားရတဲ့ ဥပဒေသ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်မှာပါ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် မြန်မာပြည်မှာ လက်နက်ကိုင်ခွဲထွက်ရေးလုပ်နေခဲ့ကြ၊ လုပ်နေကြတဲ့အထဲမှာ အစ္စလာမ်သာသနာဝင်တွေ မပါဝင်သလို အခြားနိုင်ငံက အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်မဟုတ်တဲ့ ခွဲထွက်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကလည်း ယခုမြန်မာပြည်တွင်းအခြေအနေနဲ့ ဆီလျော်အပ်စပ်နေတာမျိုးပါ။
ဒီတော့ကား ဧရာဝတီအယ်ဒီတာကြီးပြောသလို မြန်မာပြည်အတွက် ရင်ဆိုင်လာနိုင်တယ့် ခြိမ်းခြောက်မှုတွေမှာဆိုရင် တခြားနယ်စပ်တွေထက် အနောက်ဘက်ရခိုင်ကိုသာ စစ်အာဏာရှင်တွေက တကယ့် အမှန်အကန် ခြိမ်းခြောက်မှု အဖြစ် ယူဆခဲ့ကြတယ်၊ အဲဒီနည်းအတိုင်း အခု မြန်မာပြည်တွင်းက မီဒီယာတွေ အငှားစက္ခုနဲ့ အာဏာရှင်ဥာဉ်ဆိုး ကိုသာ ပိုင်သထားတာ တွေ့နေရပါသေးတယ်။ ဒါကတော့ မြန်မာပြည်က မိဘဆရာသမားများ ဆိုဆုံးမမှုမရှိသေးတဲ့ Hatred towards Kalar ဥာဉ်ရှိနေတာကြောင့် အိန္ဒိယတောင်ပိုင်းသား အနွယ်ဝင် မြန်မာပြည်တွင်းနေ မွတ်စလင်မ်ကိုချည့် ယိုးမယ်ဖွဲ့ရင် အလိုလိုပေါ်ပြူလာဖြစ်လာနိုင်တဲ့အချက်လည်း စဉ်းစားရမယ့်အထဲ ပါဝင်နေပါသေးတယ်။
ဒီတော့ကား ရခိုင်ပဋိပက္ခ နောက်ကွယ်မှ အမျိုးသားရေး အစွန်းရောက် မီဒီယာ ဆောင်းပါးပါ – "ဒီလိုမျိုးနိုင်ငံရေးအခြေအနေမှာ ရခိုင်ပြဿနာ ချုပ်ငြိမ်းလိုတယ်ဆိုရင် အဲဒီဂျာနယ်တွေကို ထုတ်ဝေခွင့် ရပ်ဆိုင်းလိုက်ခြင်းက ပထမခြေလှမ်းဖြစ်မှာပါ။ ယာယီဖြစ်ဖြစ် ရပ်ဆိုင်းရပါမယ်။" ဆိုတာက ငြိမ်းချမ်းရေးကို တကယ်ပဲ လိုချင်တယ်ဆိုရင် အမှန်တကယ် apply လုပ်သင့်တဲ့ အချက်ဖြစ်နေပါပြီ။
ယနေ့မြန်မာပြည်ကြီးကောင်းစားဖို့၊ စစ်မှန်ပြီး စည်းကမ်းပြည့်ဝတဲ့ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်ကြီးဖြစ်ဖို့ ၊တိုင်ရင်းသားတွေ၊ ဘာသာခြားတွေအားလုံး စည်းလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်း အတူ ယှဉ်တွဲ နေထိုင်ဖို့ဆိုရင် ခလုတ်ကန်သင်းတွေ ရှင်းထုတ်ရပါလိမ့်မယ်။
Remark: ကဗျာစာသား ငွေတာရီမှဖြစ်ပါတယ်။
Posted: 10 Nov 2012 11:58 PM PST
Posted: 10 Nov 2012 08:37 PM PST
May be the result of Mass Murders and Genocide led by Radical and Rakhine Monks which is against the teaching of Buddha
King Bodawpaya (1782–1819) arrested four famous Burma Muslim Maulvis (Imams) from Myedu and killed them in Ava, the capital, after they refused to eat pork.[ Yegar, Moshe The Muslims of Burma:aStudy ofaMinority Group, Otto Harrassowitz, Wiesbaden, 1972; p. 12, paragraph 3] According to the Myedu Muslim and Burma Muslim version there were seven dark days after that execution and the king later apologized and recognized them as saints.[ Yegar Muslims; p. 12, paragraph 3][ Siddiq Khan, M., "Captain George Sorrel's Mission to the court of Amarapura, 1793-4", Journal of the Asiatic Society of Pakistan (Dacca); II (1957), pp. 132-140]Wikipedia
Zaw Htwe Zaw မင်းတို့ကုလား ဆိုပြီးစော်ကားကြ
အခုကန့်ဘလူ မှာမင်းတို့မင်းတို့တွေ ကိုဘုရားကမီးရှို့ သတ်လိုက်ပြီ
မွတ်ဆလင် ဆရာကြီး ၄ ပါးကိုစော်ကားသတ်ဖြတ်လုပ်ကြံလိုက်ကြလို့
မြန်မာပြည် တစ်ပြည်လုံး ၇ ရက်တိတိ အမှောင်ကျ ငလျင်လူပ် စတဲ့ ကပ်ဆိုက်ခဲ့လို့
ဗလီ ၄လုံးဆောက် ပြီးယတြာချေ ပေးခဲ့ရတဲ့သမိုင်း တွေလေလာကြပါအုံး။
မန္တလေးမဟာမုနိဘုရားကြီးပရ၀ုဏ်အတွင်းရှိ နာရီစင်ထီးတိုင်တိမ်းစောင်းခြင်း ရှင်မာလဲဘုရား ဓမ္မာရုံရှိ အင်္ဂတေပန်းများနှင့် အနောက်ဘက်မျက်နှာစာရှိ ခြင်သေ့ရုပ်တုတစ်ခုပြိုကျခြင်းများဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။ ငလျှင်လှုပ်ခတ်မှုကြောင့် မြစ်သား-မြင်းခြံလမ်းပိုင်းရှိ ကင်းစိန်ဈေးအရှေ့ရွာ ရွာဦးဘုန်းကြီးကျောင်း၊ စေတီ၁၈ ဆူ ရှိသည့်အနက် ၅ ဆူနှင့် အရံစေတီ ၄ဆူတို့မှာ စိန်ဖူးတော်မြေခခြင်း စေတီတော်ခြောက်ဆူမှာဖောင်းရစ်တော်အက်ကွဲခြင်းတို့ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ — မန္တလေး ငလျင် ဓါတ်ပုံများ (4 photos)
Posted: 10 Nov 2012 08:33 PM PST
ရခိုင်အကြမ်းဖက်သမားများ မီးရှို့ဖျက်ဆီးမှုကြောင့် ပျက်ဆီးသွားသော ကျောက်ဖြူ ဂျာမေဗလီသစ် ဝတ်ကျောင်းတော်
Mosque destroyed in Kyaukpyu.
Posted: 10 Nov 2012 08:16 PM PST
Why did U Thein Sein's government keeping those Arakanese Mass Murders in the Commission? Are you supporting them?
Why did Khwe Thar Aung still in the Commission after he told the lies in this video?
Posted: 10 Nov 2012 05:46 PM PST
Thanks to YK who sent me the following video clip which is not only inspiring but proves that handicap is notabarrier to success in life.
Inferiority and weakness is onlyamental condition.
See how this great man overcome every obstacles and achieved so many things that other perfect bodies cannot do.
I blogged about Nick Vujicic in this post called We Have Four But He Has None.
Nicholas James Vujicic, (born4December 1982) isaSerbian Australian evangelist and motivational speaker born with tetra-amelia syndrome,arare disorder characterised by the absence of all four limbs. Asachild, he struggled mentally and emotionally as well as physically, but eventually came to terms with his disability and, at the age of seventeen, started his own non-profit organisation, Life Without Limbs. Vujicic presents motivational speeches worldwide, on life withadisability, hope and finding meaning in life. He also speaks about his belief that God can use any willing heart to do his work and that God is big enough to overcome any and all disabilities.
He married his fiance, Kanae Miyahara, on February 12th this year.